Any Questions? – DVB
Any Questions? ရန်ကုန်တိုင်းအစီအစဉ်(အပိုင်း၄နောက်ဆုံးပိုင်း)
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပထမအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်အတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းအစီအစဉ် နောက်ဆုံးပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ဒီနေ့အစီအစဉ်အတွက် အခု အွန်လိုင်းပေါ်က မေးခွန်းမေးမယ့် မောင်လေးတွေကို ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ မောင်လေးမောင်ကျော်မင်းဦး။ မောင်လေး မောင်ကျော်မင်းဦး ရှိလားမသိဘူးနော်။ ဟုတ်ကဲ့၊ မေးလို့ရပါပြီ။ မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ရှေ့မှာလည်း အားလုံးက တော်တော်များများ မေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ ကျနော် မေးချင်တာက၊ ကျနော်တို့ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ အစီအစဉ်က ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးရမယ့် လူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ အစီအစဉ်လည်း ဖြစ်တော့ ကျနော်မေးချင်တာက လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်၊ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲထည့်မယ့် လူငယ်တွေအနေနဲ့ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဆိုရင် ငါးသန်းလောက် ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိထားရတယ်ပေါ့။ ရန်ကုန်မှာလည်းပဲ၊ ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလည်း တော်တော်များတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ ကျနော်အဓိက မေးချင်တာက မေးခွန်းဆိုတာထက် NLD ပါတီကို ကျနော်မေးချင်တာပေါ့နော်။ လက်ရှိမှာလည်း အစိုးရဖွဲ့ထားတဲ့ ပါတီလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူငယ်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပါဝင်လာမှုရာခိုင်နှုန်း များဖို့ရှိနိုင်လား၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိကလည်း ကိုဗစ်ကာလလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၊ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကို ပထမအကြိမ် မဲပေးမယ့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ လျစ်လျှူရှုထားတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကို ဆရာ့ရဲ့ အမြင်လေးကို ကျနော် မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဆရာစိုးဝင်းဦး ဖြေပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သားမေးခွန်းလေးကို ဆရာ ကျေနပ်နှစ်သက်မိပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ ပါဝင်မှုပေါ့နော်။ ပထမအကြိမ်မဲပေးမယ့် လူငယ်တွေရဲ့ ပါဝင်မှုက ပိုတိုးပြီးတော့ များလာမယ်လို့ပဲ ဆရာတို့ဘက်က ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ကလည်း NLD အစိုးရ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်ထောင်စု တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လူငယ့်ရေးရာ မူဝါဒတွေ အားလုံးကို ချမှတ်ပြီးတော့ ဗမာပြည်ရဲ့သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် လူငယ့်ရေးရာမူဝါဒတွေကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ ကြေညာပြီးတော့ လူငယ့်ရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူငယ်လုပ်ငန်းကော်မတီတွေ၊ အဖွဲ့တွေ အားလုံးကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကျေးအထိ ဖွဲ့ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေနိုင်တာ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာလည်း များသောအားဖြင့် ကွာရန်တင်းစင်တာတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ဥပမာအားဖြင့် We Love Yangon လို အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့၊ ဆရာတို့ ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်၊ အမြောက်အများလာပြီးတော့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ သူတွေအားလုံးဟာ လူငယ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လူငယ်တွေရဲ့ ပါဝင်မှုက ကိုဗစ်ကာလလို အလွန်အင်မတန် အန္တရာယ်များပြီးတော့ စွန့်စားမှု အလွန်အင်မတန်ကြီးတဲ့ အချိန်မှာတောင်မှ အလွန်အင်မတန် အားရကျေနပ်ဖွယ်ရာ ရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက် မဲပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာလည်း အများကြီး ပါဝင်လာမယ့် အနေအထား ရှိနေတယ်လို့ ဆရာယုံကြည်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အွန်လိုင်းမီဒီယာကို ပိုပြီးတော့ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာပါပြီ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲထက် ၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကြားမှာ အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုပေါ့နော်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ အသုံးပြုမှုအားက အလွန်အင်မတန်ကောင်းလာတယ်။ အဲဒီ ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးပြုမှုကလည်း အသိပ်အသည်းသုံးနေတာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် လူငယ်တွေရဲ့ ပါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍက အဖက်ဖက်က အခြေအနေပေးနေတဲ့အခါ ဒီထက်အများကြီး မြင့်တက်လာမယ်လို့ ကျနော်တို့လည်း ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်း ဆရာ ဖြေကြားချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မောင်လေး မောင်ဇော်မျိုးထွန်း။ မောင်လေး မောင်ဇော်မျိုးထွန်း ရှိလား။ ဟုတ်ကဲ့ မောင်လေး မေးလို့ရပါပြီ။ မေး။ ။ ကျနော်က ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီက ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကို မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အခု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှ ကချင်ရယ်၊ ကရင်ရယ်၊ ရခိုင်ရယ်၊ ရှမ်းရယ်ပေါ့၊ ဒီနယ်တွေကို မဲကျင်းပလို့ မရတဲ့နေရာတွေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ အဲဒီလို သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အပေါ်မှာ တရားမျှတမှု ရှိတယ်လို့ ထင်လားပေါ့။ နောက်ထပ်တစ်ခုက ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီက စစ်တပ်နဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ပြောထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ တခြားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေး မူဝါဒတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ပထမဦးဆုံးကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာလိုက်တာပေါ့နော်။ တချို့မြို့နယ်အလိုက်၊ တချို့တော့ မြို့နယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ရပ်ကျေးအုပ်စုတွေ၊ ကျေးရွာတွေပေါ့နော်။ အဲဒါတွေကိုတော့ တည့်တည့်ပဲပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ တရားမျှတမှု ရှိတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် အကြောင်းပြချက် မခိုင်လုံဘူးပေါ့နော်။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာတာပေါ့နော်၊ ရွေးကောက်ပွဲကို မပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ကြေညာတာပေါ့နော်။ ကြေညာတာ အကြောင်းပြချက်ကို ကျမ သိပ်မတွေ့ရဘူးပေါ့။ ဥပမာ ထားပါတော့၊ အကြောင်းပြချက်ဆို နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ လုံခြုံရေးကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် COVID-19 ကူးစက်မှု များနေလို့လားပေါ့နော်။ လုံခြုံရေးကြောင့်လို့ ပြောလို့ရှိရင် ဥပမာ - ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝလိုမျိုးမှာ လုံခြုံရေးမကောင်းပေမယ့် ဖျက်သိမ်းတဲ့အထဲမှာ မပါဘူးပေါ့နော်။ ရွေးကောက်ပွဲက ဆက်လုပ်မှာပဲ။ ပြီးလို့ရှိရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပေါက်တောတို့၊ ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်ပေါ့၊ ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းကိုင်ပေါ့။ ဒီလိုမျိုးတွေမှာကျတော့ လုံခြုံရေးကောင်းနေလျှက်နဲ့လည်း ဖျက်သိမ်းတာကို တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ လုံခြုံရေး မကောင်းပေမယ့် ပါနေတယ်၊ လုံခြုံရေးကောင်းပေမယ့် ဖျက်သိမ်းတာကို တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါလေးတွေကို တွေ့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ ရပ်ကွက်နဲ့ ကျေးရွာအချို့မှာ မကျင်းပနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။ အဲဒါတွေ ဆိုလို့ရှိရင် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မှာ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂ အုပ်စုဆိုတော့ ဒီ ANP ပါတီကနေပြီး ကျေးလက်လူထု ကြားမှာ အောင်မြင်နေတယ်ပေါ့နော်။ ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ အဓိကကတော့ အာဏာရပါတီ အသာစီးရဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပဲ ကျမ ယူဆတယ်ရှင့်။ နောက် ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီပေါ့နော်။ KNDP က အားကောင်းတယ်။ ပြီးရင် သံတောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက အားကောင်းတယ်။ အဲဒီလို တခြား တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပဘူးဆိုတော့ NLD သိပ်ပြီးတော့မှ နိုင်နိုင်ခြေမရှိတဲ့နေရာတွေ ဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး သဘောမျိုး သက်ရောက်နေတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ကျမတို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက ကျတော့ မြို့နယ် ၃၃၀ ရှိတဲ့အထဲမှာ ၇ နေရာက မကျင်းပနိုင်တာ။ အဲဒါကတော့ လုံခြုံရေးမရှိလို့၊ လုံခြုံရေး စိတ်မချရလို့ပေါ့။ နောက်အခုကျတော့၊ ဒီ ၂၀၂၀ မှာကျတော့ ၁၅ မြို့နယ် ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ ၁၅ မြို့နယ်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတော့ နှစ်ဆတောင် တက်သွားတယ်။ အဲဒါ လုံခြုံရေးကြောင့်လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ကိုဗစ် ကြောင့်လားဆိုရင် ရန်ကုန်တစ်တိုင်းလုံးလည်း ကိုကိုးကျွန်းကနေ လွဲပြီးတော့မှ Stay at home လုပ်ထားတာဆိုတော့ ကိုဗစ်ကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ လုံခြုံရေးကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ကျမတို့ကတော့ တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြီး ပြောကြားထားတာ မရှိပေမယ့်၊ အာဏာရပါတီကို အသာစီးရစေဖို့လို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်၊ ဒါသည် မတရားဘူးလို့ ကျမ ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျမတို့မှာလေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ မူဝါဒရှိပါတယ်ရှင့်။ ကျမတို့က ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို သွားမယ်၊ နောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတစ်ခုချင်း၊ လူမျိုးစု တစ်ခုချင်းစီရဲ့ စာပေ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အားပေးမယ်၊ ပြီးလို့ရှိရင် ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဟာက ပထမဦးဆုံး ခြေလှမ်းကတော့ ၂၆၁ ပေါ့နော်။ ပုဒ်မ ၂၆၁ ကို ပြင်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကနေပြီးတော့မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်မယ်ပေါ့နော်။ ပြီးလို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှု များလာအောင် ကျမတို့က ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုခြင်းပေါ့နော် သွားမယ်ဆိုတာ။ တစ်ခါတလေကျလို့ရှိရင် အောက်ထပ်ကနေ အပေါ်ထပ်ကို တက်တယ်ဆိုရင် ခုန်တက်လို့ မရဘူးပေါ့နော်။ လှေခါးတစ်ထစ်ချင်းစီ တက်ရတာ။ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကျမတို့က ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို သွားမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီကို ပိုသက်ဝင်ဖို့၊ ဖက်ဒရယ်ကို ပိုသက်ဝင်ဖို့ဆိုရင် ကျမတို့ ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့တော့ အဲဒါတွေ ကျမတို့ လုပ်ချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒီတော့ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ မောင်လေး မောင်မြင့်မြတ်သူပေါ့နော်။ မောင်လေး မောင်မြင့်မြတ်သူ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မေးခွန်းလေး မေးလို့ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျမက မြင့်မြတ်သူရဲ့ မေမေ ဒေါ်ခင်မာအေးပါ။ ကျမသားက ဉာဏ်ရည် မသန်စွမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသားရဲ့ ကိုယ်စား ကျမက မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်။ ကျမမေးမယ့်သူကတော့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုပါ။ ကျမတို့သားတွေက အခုဆိုရင် အသက် ၂၀ ကျော်ပြီ။ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးတွေ မရခဲ့ဘူး။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးတွေလည်း မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ရဲ့ လူငယ်တွေဟာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေလည်း အရမ်းနည်းပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှုတွေလည်း မရှိကြဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျမတို့က သူတို့ကို နောင်လာမယ့်အချိန်မှာ သူတို့အတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ လိုက်လျောညီထွေတဲ့ ဝင်ငွေပေါ့။ အဲဒါမျိုးတွေကို ကျမတို့က လိုချင်ပါတယ်။ သူတို့က မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်၊ တော်တော်များများက။ မြန်မာပြည်မှာ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်း လူငယ်တွေဟာ တကယ်ကို အလုပ်အကိုင်အတွက် လက်ချိုးရေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်၊ ဒီဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်၊ သူတို့နဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိတဲ့ အလုပ်အကိုင်များ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် … ကျမတို့က အဲဒါတွေကို မျှော်လင့်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ဘက်ကို မသန်စွမ်းတွေဘက်ကို အခွင့်အရေး အရမ်း နည်းပါးတယ်။ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းတွေ အတွက်ကို ဘာတွေများ စီစဉ်ပေးထားသလဲပေါ့။ ကျမ အဲဒါကို သိချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ NLD က ဆရာစိုးဝင်းဦး ဖြေပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မေးခွန်းမေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မ။ အထူးသဖြင့် ဒီ မသန်စွမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ … အခုကတော့ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်း ကလေးပေါ့နော်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့က ရေရှည်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးမှာ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်း ကလေးငယ်တွေ အားလုံး ပေါင်းစပ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ အစီအစဉ်မျိုးတွေကို ရေးဆွဲပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်ထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း နောင်လာမယ့် အစီအစဉ်သစ်တွေမှာ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူတိုင်းအကျုံးဝင်တဲ့၊ အားလုံးအကျုံးဝင်တဲ့ ပညာရေးအစီအစဉ်မှာ မသန်စွမ်း ကလေးငယ်များ အားလုံးအပါအဝင်၊ မသန်စွမ်းကလေးငယ်များ အားလုံးဆိုတာမှာလည်း ကျန်တဲ့ မသန်စွမ်းတွေထက် ပိုပြီးတော့ အားနည်းချက်ရှိတဲ့ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကလေးငယ်တွေကို သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အသက်မွေးမှုကို ပေးနိုင်တဲ့ သီးသန့်လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်းမျိုးတွေပေါ့နော်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်းမျိုးတွေကို ပိုပြီးတော့ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ဒီကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုး အဆင်ပြေလာမယ်။ ဒီလိုမျိုး ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပြီးတော့ အဲဒီအစီအမံတွေကို စပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက် ပိုပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေ ပိုပြီးတော့ အရှိန်ရလာလို့ရှိရင်တော့ ပိုပြီးတော့ သိသာထင်ရှားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူ၊ ကြိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ မဲကို သွားကိုသွားပေးရမယ်။ ဒါ ပြည်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးပေါ့နော်။ ၂၀၁၅ တုန်းကလည်း ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေကြားတယ်ပေါ့နော်၊ ၂၀၂၀ လည်း ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေလည်း ကြားနေရတုန်းပဲပေါ့နော်။ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာချင်းတူတူ အသက်ရှူချောင်ချောင်နဲ့ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတဲ့ အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ပေါ့နော်၊ ကိုယ်ပေးမှ ရမယ့်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ မဲတစ်ပြားက အရမ်းကို တန်ဖိုးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ ညီမတို့မြို့နယ်၊ သာကေတဘက်မှာကျတော့ အခြေခံလူတန်းစားက များတယ်ရှင့်။ အခြေခံလူတန်းစား များတယ်ဆိုတော့ သူတို့အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ၊ နောက်ပြီးကျတော့ ဒီဘက်မှာဆိုရင် ကျူးကျော်တွေ ရှိတယ်။ ကျူးကျော်တွေဆိုတော့ သူတို့အတွက် နေစရာတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ လမ်းသာယာရေးတွေ အဲဒါတွေအတွက်ကိုပဲ ပိုပြီးတော့ အဓိကထားပြီး လိုချင်တယ်ရှင့်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း LGBT ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အဓိကကတော့ ကျနော် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကို ပိုပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုအချိန်မှာ ဘယ်အလုပ်ခေါ်ခေါ် အခုလက်ရှိ LGBT ဆိုလို့ရှိရင် အလုပ်ရှင်တော်တော်များများက သိပ် သဘောမကျကြဘူး။ အလုပ်ခန့်ဖို့ကလည်း သူများတွေထက်စာရင် အခွင့်အရေး အရမ်းနည်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို တခြားပြည်သူတွေနဲ့ တန်းတူ အလုပ်အခွင့်အရေးတွေ ပိုပေးစေချင်တယ်။ ကျနော်တို့လူငယ်တွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ဝင်စားမှသာ ကျနော်တို့က ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို သိပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ရှင်သန်ထွန်းကားအောင် လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်။ မဟုတ်ရင် ကျနော်က ကိုယ့်ရဲ့ ရသင့် ရပိုင်ခွင့်တွေကို မသိရင် ဒီ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားဖို့ ခက်ခဲတယ်ပေါ့။ မဲပေးမယ့် လူငယ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ပေါ့နော်၊ ညီမယုံကြည်တဲ့ ညီမတို့ခေါင်းဆောင်ကပေါ့နော် ညီမတို့အပေါ် အများကြီး လုပ်ပေးမယ်လို့ ညီမအနေနဲ့ ယုံကြည်တယ်။ ပြီးတော့ ညီမတို့နိုင်ငံက အခုဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်၊ သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ တန်းတူ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့၊ သူများနိုင်ငံတွေက ရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေရဖို့ အဲဒီလောက်အထိတော့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာက အနိုင်နဲ့အရှုံးကတော့ နှစ်မျိုးတော့ ရှိမှာပဲပေါ့။ အနိုင်နဲ့အရှုံးနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲက ကျနော်တို့ မကြိုက်တဲ့သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကသာ ကျနော်တို့က မဲမပေးလိုက်တဲ့ မဲတစ်မဲလေးကြောင့် ကပ်ပြီးနိုင်သွားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က ကျနော်တို့ကိုယ်ကျနော်တို့ နောက်မှ နောင်တရမိမယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ငါးနှစ်မှာမှ တစ်ကြိမ်ရတဲ့ အခွင့်အရေး၊ ပြီးတော့ အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးတဲ့အပြင်ကို ဒါက မဲစာရင်းမှာ ကိုယ့်နာမည်လည်း ပါရမယ်၊ ပြီးလို့ရှိရင် ဒါက ပြဌာန်းဥပဒေအရလည်း မဲဆန္ဒနယ်မှာ ပေးနိုင်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်မှသာလျှင် ဒီအခွင့်အရေးက ရရှိတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ကတော့ အခု ပထမအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် လူငယ်တွေကော၊ နောက်ထပ် မဲဆက်ပေးရမယ့်သူတွေရောပေါ့နော်၊ သွားရောက်ပြီးတော့ မဲပေးသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကနေ ညီမတို့ တခုခုကို ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ ညီမတော့ ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊ ဒါပေမယ့် ညီမတို့ရဲ့မဲအပေါ်မှာတော့ မူတည်တယ်ပေါ့နော်။ တကယ်ကို လုပ်နိုင်မယ့်သူကို ပေးဖို့တော့ လိုတယ်ပေါ့။ ညီမတို့ တကယ်သာ မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ညီမတို့နိုင်ငံအတွက်တော့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကတော့ ဖြစ်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ နောက်ထပ်မောင်လေးတစ်ယောက်ကတော့ လွှမ်းမိုးအောင်ပါရှင့်။ မောင်လေး မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ ကျနော်မေးချင်တဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ ကလေးတွေရဲ့ ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့၊ ကလေးတွေ ကဏ္ဍလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အားလုံးပါတာက ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပြီးလို့ရှိရင် ကလေးတွေရဲ့ ပါဝင်မှုတွေနဲ့ တခြား အသင်းအဖွဲ့တွေ ဘာတွေပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးတွေမှာရော ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးစားရိတ်တွေ၊ ဘက်ဂျက်တွေကို အခုလက်ရှိပေါ့နော် ရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်ထက် ပိုပြီးတော့များ … အကယ်၍ လွှတ်တော်ထဲမှာ နောက်ငါးနှစ်တာ ဆက်ပြီးတော့ အာဏာရသွားတဲ့အခါမှာ ဒီဘတ်ဂျက်တွေ ထပ်ပြီး တိုးလာပေးနိုင်မလား။ ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ဒီဘတ်ဂျက်တွေကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်း ချပြပေးဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မလား။ နောက်ဆုံး အချက်အနေနဲ့က လူငယ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ လူငယ့်ရေးရာ၊ လူငယ်မူဝါဒတွေ ရေးဆွဲတဲ့အခါတိုင်းမှာ ကျနော်တို့လို လူငယ်တွေအားလုံးအတွက် အစိုးရတစ်ခု အနေနဲ့ရော ဘယ်လို ထောက်ပံ့မှုတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို ကျနော့်အနေနဲ့ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးပါ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သူကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို မေးထားတဲ့အတွက် ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါသားရယ်။ အခုလို ဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တွေက စိတ်ဝင်စားတာ အလွန်အင်မတန်မှ နိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်လည်း အားရစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာက အစိုးရကိုယ်တိုင်က လိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍအလိုက် ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ လုံလောက်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေရအောင် သူက စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ လိုအပ်တာကိုး။ အဓိကကတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၌က၊ နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို စောင့်ရှောက်ရတဲ့ မိဘတွေ၌က ပြောင်းလဲလာတဲ့ စနစ်သစ် ပညာရေးမှာ အရည်အသွေးပြည့် လူငယ်တွေ ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီပြည့်လာတဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ မိမိဘဝကို မိမိ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့၊ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုဖို့၊ နောက်ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ နိုင်ငံကို အကျိုးပြုဖို့ပေါ့နော်။ ဒါမျိုးတွေ အဆင်ပြေဖို့ မိဘတွေကိုယ်၌ကလည်း အားပေးမယ်၊ ကျောင်းသားတွေ၌ကလည်း ဒီလို အတွေးအမြင် ဖွင့်ပြီးတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် မိဘ၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသားအားလုံး ဒီ ပညာရေးတြိဂံကလည်း အားလုံး တာဝန်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အစိုးရ တစ်ရပ်တည်းတင် မဟုတ်ဘူးလေ၊ ပညာရေး ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်။ နောက် ဆရာတို့ နောင်လာမယ့် သက်တမ်းမှာတော့ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ဘတ်ဂျက်တွေလည်း ရလာမယ်၊ သို့သော် ပညာရေးဘတ်ဂျက်ဆိုတာက ပညာရေးကဏ္ဍကို ရော့အင့်ဆို အများကြီး ပုံပေးလို့တော့ မရနိုင်ဘူး။ နိုင်ငံမှာ ကဏ္ဍတွေအသီးသီးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ဟာမိုနီဖြစ်ရတယ်။ သဟဇာတ မျှတရတယ်၊ စည်းချက် ဝါးချက် ညီရတယ်။ အဲဒီအတွက် သို့သော် တကယ်အခြေခံလိုအပ်ချက်ထဲမှာ ပညာရေးက အရေးကြီးပါတယ်။ အခုလို ကိုဗစ်ကာလဆိုရင် ဘက်ဂျက်တွေကို ကျန်းမာရေးပဲပေါ့၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကူညီရေးပေါ့။ ကျနော်တို့ အခြေအနေ အချိန်အခါအရတော့ ဒီဘတ်ဂျက်ကို ပိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးဘက်ဂျက်ကတော့ တကယ့်တကယ်ခေတ်တွေနဲ့ ယှဉ်လို့ရှိရင်တော့ အဆမတန်၊ နှစ်ဆလောက်ခုန်တက်လာတာ သေချာသွားပြီ။ ဒီထက် တက်အောင်လည်း ကြိုးစားဖို့ အစိုးရတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိမှာပါ။ သို့သော် ပြည်သူတွေကိုယ်၌ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ သိထားတဲ့အသိ၊ တစ်ဦးချင်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ပူးပေါင်းနိုင်ရင်တော့ ဆရာတို့ပညာရေးက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာဆီယံအဆင့်အတန်းမှာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ပြန်ရောက်လာမယ်လို့ ဆရာတို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သားတို့အားလုံးလည်း ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ညီမတို့က ကိုယ်လိုချင်တဲ့အစိုးရကို အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ မတင်မြှောက်ဘူးဆိုရင်၊ မရွေးချယ်ရဲဘူးဆိုရင် ညီမတို့နိုင်ငံအတွက် ဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတွေကို ဘယ်သူက ဖြေရှင်းပေးမှာလဲပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်က ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစိုးရကို ကိုယ်ရွေးချယ်ရမယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ အပြောင်းအလဲအတွက်ကို မဲပေးခြင်းက အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ ကျနော်က ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းတွေကို ပိုပြီးတော့ ရစေချင်တယ်။ ပြီးတော့ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း ပိုပြီးတော့ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးမဲပေးမယ့် လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင် ခံစားချက်ကတော့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ မဲအပေါ်မှာ အောင်မြင်မှု ရမရပေါ့။ တကယ်လို့ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပါတီက တကယ်လို့ အောင်မြင်လာပြီ၊ တကယ်လို့ အနိုင်ရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် တကယ်ကို ကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ရင်ခုန်နေမိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တော်တော်ဆိုးနေတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတွေကို ဦးစားပေးပြီး သူတို့ကို လုပ်ဆောင်စေချင်တယ်။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးတွေက အရာရာကို ချိုးဖောက် ခံနေရတယ်ဗျ။ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးတို့၊ လူ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်၊ နောက်တစ်ခုက။ လူ့အခွင့်အရေးလည်း အရေးကြီးတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးတွေ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတော်တော်များများကို သူတို့ကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျေးဇူးပါရှင့်။ နောက်ထပ်မေးမယ့် မောင်လေးကတော့ မောင်လေး မောင်ဉာဏ်လင်းထက် ပေါ့နော်။ မောင်လေးမောင်ဉာဏ်လင်းထက် မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီ။ မေး။ ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျနော် မေးခွန်းမေးရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့်နာမည်က ဉာဏ်လင်းထက်ပါ။ ကျနော်က ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာ ဥပဒေ နောက်ဆုံးနှစ် တက်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ NLD ပါတီကို မေးချင်တာပေါ့နော်။ အစိုးရအနေနဲ့က၊ NLD အနေနဲ့ နောက်ထပ် ငါးနှစ်မှာ အာဏာရမယ်ဆိုရင် တရားရေးဘက်ကို အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ ပြည့်စုံအောင်၊ လစာတွေ ပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးပေးဖို့ အခွင့်အရေး ရှိလားပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ လက်ရှိမှာ ထပ်အာဏာရမယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ပါတီအနေနဲ့ အစီအစဉ်ရှိလားပေါ့။ အဲဒါလေး ဖြေပေးပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဆရာစိုးဝင်းဦး ဖြေပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မေးခွန်းလေးကတော့ နည်းနည်းများတယ် ထင်တယ်နော်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဖြေရလို့ရှိရင်တော့ ညီလေးက ဥပဒေပညာနဲ့ ကျောင်းတက်နေတယ်ပေါ့နော်။ ကျောင်းပြီးပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း စောင့်တဲ့အခါမှာ အစိုးရ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့ သူက ပိုပြီးတော့ မျှော်လင့်တယ်ပေါ့။ နိုင်ငံမှာတော့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းအားလုံးကို တရားရေးဌာနရယ်လို့ သီးသန့်ခွဲပြီးစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံတစ်ခုမှာတော့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအားလုံးရဲ့ ဘဝကို လုပ်ခလစာနဲ့ သူတို့ဘဝရပ်တည်မှု လုံလောက်မှု ရှိအောင်တော့ အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့ လစာကို အခါအားလျော်စွာ နိုင်ငံရဲ့ ဘက်ဂျက် ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ တောက်လျှောက်တိုးပေးနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ပိုပြီးတော့ သိသာတဲ့ အနေအထား ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အူမတောင့်မှ သီလစောင့်မယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုတည်းနဲ့ အခုနပြောတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံသားကောင်း မပီသရာ ကျပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြည့်စုံဖို့ရယ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဘဝလုံခြုံမှု ရှိဖို့ပေါ့နော်။ အဲဒါကတော့ နိုင်ငံကိုတာဝန်ယူရတဲ့ မည်သည့်အစိုးရမဆို ဆောင်ရွက်ရမယ့် တကယ့် အဓိကတာဝန်ထဲမှာပါတယ်လို့ ဆရာတို့ပါတီအနေနဲ့ ခံယူပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ရှေ့လာမယ့်သက်တမ်း ငါးနှစ်ကာလမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြည်သူတွေ ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကို ရလို့ အစိုးရအနေနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ပြေလည် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အဆင်ပြေပြီးတော့ အဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဆရာ ဒီနေရာကနေ သတင်းစကားလေး ပါးနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီတော့ အခု နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပေါ့နော်။ မောင်လေး ကိုကျော်မိုးအောင် ရှိလားမသိဘူးနော်။ ဟုတ်ကဲ့ မောင်လေး မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီ။ မေး။ ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်က ကျော်မိုးအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေပညာဌာန တတိယနှစ်မှာ ပညာသင်ကြားနေပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကပါ။ ကျနော်က မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ နေပါတယ်။ ပြီးတော့ အခု မေးခွန်းမေးလိုတာကတော့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကို မေးမြန်းလိုတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာသာမက၊ ဒီ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင် ပါတီမှာဆိုလို့ရှိရင် လူငယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလည်း အများကြီးပဲ ရွေးချယ်ထားတာ တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျနော်တို့လူငယ်တွေကို နေရာပေးတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေကို ဘယ်လိုမျိုးစည်းမျဉ်းမျိုး၊ ဘယ်လိုမျိုး အချက်မျိုးကို ကြည့်ပြီးတော့ ရွေးချယ်ထားလဲပေါ့နော်။ ကျနော့်အနေနဲ့ အဲဒါကို ပထမအချက်အနေနဲ့ သိချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အန်တီ့ရဲ့အမြင်ပေါ့၊ ဒေါက်တာ့ရဲ့ အမြင်ပေါ့နော်။ ရွေးချယ်ထားတဲ့ လူငယ်တွေကရော အခု ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိလားဆိုတာမျိုးကို၊ ကိုက်ညီမှု ရှိတယ်လို့ မြင်မိလားပေါ့၊ အဲဒီနှစ်ချက်ကို ကျနော့်အနေနဲ့ သိချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြေကြားပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဖြေ။ ။ ကျေးဇူးပါရှင့်၊ ကျေးဇူးပါရှင့်။ မေးခွန်းမေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင့်။ ကျမတို့ ပါတီအနေနဲ့တော့ ပေါ့နော်၊ ကျမတို့ပါတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကကျတော့ လူငယ်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပါတီတွင်း နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်မှု ရှိနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုး ကျမတို့ ရေးဆွဲထားပါတယ်ရှင့်။ လူငယ်တွေ၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ပါတီတွင်းမှာ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍရဖို့လို့ အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနဲ့ ပါတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနဲ့ အာမခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ရဲ့ ပါတီဝင်တွေထဲမှာ ဆိုလို့ရှိရင် လူငယ်ပေါ့နော်၊ လူငယ်လို့ပြောရင် ကျမတို့က ၃၅ နှစ်အောက်ပါရှင့်။ ၃၅ နှစ်အောက်လူငယ်ရဲ့ ပါဝင်မှုနှုန်းက ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ ပြီးရင် ၃၅ နှစ်အထက်ကတော့ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ အဲဒီ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာလည်း အဲဒီလိုပေါ့နော်၊ ၃၅ နှစ်နဲ့ ၄၀ ပတ်ချာလည်၊ ၅၀ ပတ်ချာလည် ပိုများပြီးတော့မှာ ၆၀ ကျော်တဲ့သူက နည်းပါတယ်ရှင့်။ နည်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ အဲဒီလိုပဲ၊ ကျမတို့ ပါတီဝင်တွေထဲမှာ လူငယ်တွေများတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လျှောက်တဲ့အထဲမှာလည်း လူငယ်တွေများတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ လူငယ်တွေကတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထဲမှာတော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ ဆိုပြီးတော့မှ ကျမတို့က လူငယ်တွေအတွက် သီးသန့်စံသတ်မှတ်ချက်ကို လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျမတို့ကကျတော့ ဒီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်ခြင်းမှာ ကျမတို့ အချက်ငါးချက်နဲ့ စဉ်းစားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ ကျမတို့ရဲ့ အခြေခံမူအားဖြင့် ကျမတို့က သာတူညီမျှမှု၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ကွဲပြားစုံလင်မှု၊ တရားမျှတမှုနဲ့ ပြီးလို့ရှိရင် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုနဲ့ ကျမတို့ ပါတီရဲ့ စံတန်ဖိုးတွေကို ကျမတို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှ ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ပြည်သူလူထု ဘယ်လောက် ကြိုက်နှစ်သက်လဲဆိုတာကတော့ ကျမတို့က ဒီလိုစဉ်းစားရမှာပေါ့ရှင့်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲ အဖြေကို ကျမတို့က စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ရှုံးသွားတိုင်းလည်း ညံ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ တစ်ခါတလေကျရင် ကိုယ်နဲ့ ပြိုင်ရတဲ့လူအပေါ်လည်း မူတည်တယ်။ နောက် ပြည်သူလူထုရဲ့ အစွဲကင်းကင်းနဲ့ ဘယ်လောက် မဲပေးလဲဆိုတဲ့၊ ပြည်သူလူထု ဘယ်လောက်က အစွဲကင်းကင်းနဲ့ မဲပေးလဲဆိုတာ အပေါ်လည်း မူတည်တာပေါ့နော်။ ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ စဉ်းစားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်၊ ပါတီကိုလည်း ကြည့်တယ်၊ ပါတီကြည့်တယ်ဆိုတာ ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေ၊ ပါတီရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကြည့်တာပေါ့နော်၊ ပါတီကို ကြည့်တယ်ဆိုတာ။ ပြီးလို့ရှိရင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းကိုလည်း ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ ပြီးလို့ရှိရင် ဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကြောင်းကို၊ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို သိပြီးလို့ရှိရင် ဘယ်လောက် ကိုယ့်ရဲ့ဒေသအကျိုးကို လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ၊ ဒါတွေနဲ့ စဉ်းစားပြီးတော့မှ အစွဲကင်းကင်းနဲ့ မဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျမတို့ရွေးထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၊ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အများစုကို ကျမ အားရကျေနပ်မှု ရှိပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ဆိုတော့ ကျမတို့ ဒီနေ့မှာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ပါဝင်ပေးကြတဲ့၊ မေးခွန်းတွေ မေးပေးသွားကြတဲ့ လူငယ်တွေကိုရော၊ ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ ဖြေပေးသွားတဲ့ ပါတီအသီးသီးက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Any Questions?ရန်ကုန်တိုင်းအစီအစဉ် (တတိယပိုင်း)
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပထမအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်အတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းအစီအစဉ် တတိယပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ ကျမ နေရီရီနဲ့အတူ ဦးနေဇော်နိုင်နဲ့ နွယ်နီတင်မောင်တို့က တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ ဒီနေ့အစီအစဉ်အတွက် မပြောမဖြစ်ပြောရမှာက ဂျူဗလီဟောပေါ့။ ဝိတိုရိယဘုရင်မကြီးရဲ့ စိန်ရတုမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆောက်ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ဒီအဆောက်အဦမှာ မင်္ဂလာဆောင်တွေ၊ လူထုအစည်းအဝေးပွဲတွေ၊ ဟောပြောပွဲ၊ ကပွဲတွေ လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ သူက အများပိုင်လေ။ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေး၊ ယူနီဗာစီတီ ကျောင်းတိုက် ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ကောလိပ်ဥပဒေ ဆန့်ကျင်ရေး၊ ယူနီဗာစီတီရဲ့ ပထမဆုံး ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား၊ ပထမကျော်အောင်လက်မှတ်တို့ ဆည်းကပ်ရာပေါ့။ ဂန္ဒီလည်း ရောက်ခဲ့ဖူးရဲ့။ နိုဘဲလ်ဆုရှင် ဘင်္ဂါလီကဗျာဆရာကြီး တဂိုးလည်း ဒီခန်းမမှာ ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ဖူးတယ်။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂလည်း ဒီနေရာမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပေါ့။ သမိုင်းတစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံထားတဲ့ ဘူမိနက်သန် အဆောက်အဦကြီးပါပဲ။ အခုတော့ လက်ညှိုးထိုးပြစရာ ပြတိုက်ထဲ ချိတ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကလွဲလို့ မရှိတော့ပြီပဲ။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ လွတ်လပ်ရေးအလံတင် အခမ်းအနားပြီးတာနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက ဗန္ဓုလပန်းခြံမှာ လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲနဲ့ လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းကျောက်တိုင်ကို ပန္နက်ချခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီနောက်တော့ အဆောက်အဦတွေဟာ မြန်မာပညာရှင်တွေရဲ့ အရှေ့တိုင်းဟန် အငွေ့အသက်ဆီကို ကူးပြောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။ မြို့တော်ခန်းမကြီးကတော့ ကိုလိုနီခေတ်က ဆောက်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာမှုတွေနဲ့ ဆောက်ခဲ့တာ။ ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက ရန်ကုန်ကို မြို့တော်အဖြစ်သမုတ်ခဲ့သလို၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်လည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ မျက်နှာစာမြို့တော်အဖြစ် ယနေ့ထိတိုင် ရှိနေဆဲပါ။ ၁၉၄၈ ကနေ ၁၉၅၈ အထိ ဖဆပလ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလကို နိုင်ငံရေးခေတ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ၁၉၆၀ ကနေ ၁၉၆၂ အထိကိုတော့ နိုင်ငံရေးခေတ် နေဝင်ချိန်အဖြစ် သမိုင်းတင်ခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံရေးခေတ်အတွင်းမှာ ခြောက်ထပ်ရုံး၊ မြန်မာ့အသံ၊ လိပ်ခုံးခန်းမ၊ စာပေဗိမာန်၊ သမ္မတဟိုတယ်၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်၊ တက္ကသိုလ်ရပ်ဝန်းထဲက အပန်းဖြေရိပ်သာနဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် စတာတွေဟာ နိုင်ငံရေးခေတ်ကာလရဲ့ လွတ်လပ်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦတွေပေါ့။ ခေတ်တစ်ခုရဲ့ နေဝင်ချိန်ကိုလွန်တာနဲ့ ညဘက်အမှောင်သမ်းလာတာ သဘာဝဓမ္မတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းယူလိုက်ပါတော့တယ်။ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် တော်လှန်ရေးသန္ဓေတည်ခဲ့ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦလည်း ပြိုကျသွားခဲ့သလို၊ ရန်ကုန်ဟာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ မြို့တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားနဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ တန်းစီတိုးရင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ LDC နိုင်ငံအဖြစ် နိုင်ငံမွဲစာရင်းထဲ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ နိုင်ငံရေးအစ ရန်ကုန်ကဆိုတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးသိန်းမောင်စကားလိုပဲ၊ မဆလ ကာလတလျှောက်လုံး လူထုရဲ့ အထွေထွေ မကျေနပ်မှုတွေဟာ ပြည်တည်နာတစ်ခုလို ပိုလို့ရင့်မှည့်လာပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ လူထုတရပ်လုံး အုံကြွလို့ ကမ္ဘာကျော် ၈ လေးလုံး ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ ဆပ်ကပ်ဆရာရဲ့ စေခိုင်းရာ ပြကွက်အတိုင်း ပန်းစင်္ကြာမှန်ပြောင်း ကြည့်နေရသလို အသွေးအရောင် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်တို့ အမျက်ဒဏ်သင့်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နေ့မှာတော့ မြို့တော်အဖြစ်ကနေ ရွေ့လျှောလို့ သွားခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ မြို့တော်ဟာ နေပြည်တော်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပေါ့။ ရန်ကုန်အစဟာ ဥက္ကလာပလို့ပဲဆိုဆို၊ လဂမ်းမြို့လို့ပဲပြောပြော၊ ဒဂုံလို့ပဲခေါ်ခေါ်၊ အရာမဏမြို့လို့ပဲ သုံးသုံး၊ အောင်မြင်ရန်နှင်မြို့လို့ပဲ ပြောင်းပြောင်း၊ တကယ်တော့ ရန်ကုန်မြို့ဟာ အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ မြို့တည်နှစ် ၁၇၅၅ ခုနှစ်ကနေ စတင်ရေတွက်မယ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၂၆၅ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ဟာ မြို့သစ်ချဲ့ထွင်မှုတွေကြောင့် မဟာရန်ကုန်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့အညီ ပိုမိုပြန့်ကားကျယ်ဝန်းလို့ လာခဲ့တာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သလို၊ နိုင်ငံတော်မျက်နှာစာအဖြစ်ကနေ မပြောင်းမလဲ မတ်မတ်ခိုင်ခိုင် တည်ရှိနေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ Any Questions? အဖွဲ့သားတွေ စုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ ရန်ကုန်ပုံရိပ် နောက်ဆုံးပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Any Questions? အစီအစဉ်မှာ ကျနော်တို့ တိုက်ရိုက်မေးကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်၊ ကြိုတင်ပြီးတော့ ရယူထားတဲ့ မေးခွန်းတွေရှိသလို၊ စာနဲ့ လှမ်းပြီးတော့ မေးကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ အခု ကျနော် စာနဲ့ပေးပို့ ထားတဲ့သူတွေရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ပြပြီး ကျနော်မေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီကိုမေးထားတာပါ။ ကျော်ခန့်မင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်က မေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးကျော်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ၊ မော်တော်ယာဉ်ကျပ်တည်းမှုကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ၊ နောက်ဖေးလမ်းကြားက အမှိုက်တွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ၊ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကို မေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဖြေ။ ။ မေးခွန်းမေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမတို့ ဒီ ကျူးကျော်တဲတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ အမှိုက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကတော့ ကျမတို့ မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နဲ့ မူတည်ပါတယ်ရှင့်။ Organization development ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် မြို့ပြတစ်ခုရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့အညီ တည်ဆောက်ရမယ်၊ ပြုပြင်ရမယ်၊ ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျူးကျော်တွေဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာရဲ့ ရင်းမြစ်ကို ကျမတို့က အရင်စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ ပြဿနာရဲ့ ရင်းမြစ်ကဘာလဲဆိုရင် ဒီ ရွှေ့ပြောင်းသူတွေ ဖြစ်တည်လာတယ်။ မြို့သစ်တွေတည်တိုင်း တည်တိုင်းမှာလည်း ဒီပြဿနာဟာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ မြို့သစ်ကြီးတွေ အကြီးအမား တည်ဆောက်သွားတဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်၊ တောင်ကိုရီးယားလို နိုင်ငံမှာဆိုရင်၊ စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမှာ ဒီပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ ပြဿနာအဖြေထုတ်မှုတွေဟာ ကျမတို့အတွက် လေ့လာစရာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်ပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် ကျူးတွေဖြစ်လာတာသည် မြို့ပြတစ်ခု၊ မြို့သစ်တွေ မြို့သစ်တွေ တည်ဆောက်တိုင်းမှာ ဒီကျူးလို ပြဿနာမျိုးတွေဟာ မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြို့ပြတစ်ခု တည်ဆောက်မယ် ဆိုတိုင်းမှာ ဒီပြဿနာဖြေရှင်းမှုကို ထည့်ပြီး စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကြာမယ့်အချိန်ကာလ အပြင်မှာ ဒီလို ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ အတွက်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ထည့်သွင်းပြီးတော့မှ နေရာချမှုကို စီစဉ်ထားမယ်ဆိုရင် ကျူးတွေပြဿနာ မပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါဘူး။ အခုလက်ရှိ ကျူးတွေပြဿနာသည် ကျမတို့ မြို့ပြင်လေးကို ထွက်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်တည်း အင်မတန်ပေါ့၊ မြို့ပြတစ်ခုထက်တောင် ကြီးမားတဲ့ ကျူးပြဿနာကြီးက အကြီးကြီးဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒါတွေကို ကျမတို့က အခြေခံအချက်အလက်တွေကို ဒေတာတွေကောက်ပြီးတော့မှ ဒါတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင် ကျမတို့ ကျေးလက်တွေမှာပါ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု ပြဿနာက ကျမတို့ ကျူးတွေ အများကြီးဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့။ မြို့ပြပေါ်မှာ မဖြစ်မနေတက်ပြီး မဖြစ်မနေ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မြို့ပြနဲ့ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ညီမျှအောင်လုပ်နိုင်မယ်၊ ကျူးတွေအတွက် ကျမတို့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကျမတို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပေါ့၊ ကျမတို့ ဘတ်ဂျက်တစ်ခု သုံးပြီးတော့မှ ဒါကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျူးပြဿနာက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ပြီးသွားပါမယ်။ ဒါလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက အမှိုက်ပြဿနာသည်လည်းပဲ ကျမတို့က မြို့ပြပြဿနာတွေပါနော်။ ခုနကပြောတဲ့ ဒီလိုမျိုး ကျူးတွေဖြစ်လာရင်လည်း အမှိုက်ကပိုပြီးတော့ ပြဿနာဖြစ်တတ်တော့ အခြေကျနေထိုင်မှုထက် စာလို့ရှိရင် ကျူးကျော်တွေမှာ စနစ်တကျအမှိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေ၊ စနစ်တကျရေဆိုးတွေ၊ ရေသန့် သုံးစွဲမှုတွေကို စီစဉ်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒါ မြို့ပြအင်္ဂါရပ်ကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အမှိုက်တွေပိုပြီး စွန့်ပစ်တာ၊ များပြားတာ၊ လူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က စည်ပင်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပုံစံတစ်ခုချင်းတည်ဆောက်ပြီးတော့မှ အမှိုက်ရှင်းလင်းတဲ့ စနစ်ကို ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နဲ့အညီ လှပတဲ့၊ သန့်ရှင်းတဲ့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ မြို့ပြတစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီသာ အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မျှတအောင်ကိုင်မယ်လို့ ကျမတို့ ကတိပြုနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆိုတော့၊ နောက်ထပ် စာတစ်စောင်ရှိပါတယ်။ အောင်ကိုဟိန်း (အင်းစိန်) ရဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီအနေနဲ့ အနာဂတ်အတွက် အဖွဲ့အစည်းကို ဆက်လက်တည်မြဲအောင် ဘာတွေဆောင်ရွက် ထားပါသလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက်တည်းရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝါကို မှီခိုနေပါသလား။ အကယ်၍ NLD ပါတီအနေနဲ့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိပါက ငါးနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်အရာတွေကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မှာပါလဲတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့။ NLD ပါတီနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လိုရင်းပဲ ကျနော်ဖြေပေးပါ့မယ်။ အနာဂတ်အတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကိုတော့ ကျနော်တို့က ပါတီမှာ လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆိုတာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အဆင့်ကနေပြီးတော့ ဗဟိုအဆင့်အထိ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ပြည်နယ် တိုင်း၊ ဗဟိုဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ ကျနော်တို့က စနစ်တကျ တည်ဆောက်ပြီးတော့ လူငယ်တွေကိုလည်း စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သက်တမ်းမီတဲ့လူငယ်တွေ အားလုံးကို အခုလို ရွေးကောက်ပွဲ ကာလနဲ့ ကြုံတဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်နဲ့ နောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်း လူငယ်တွေကို သတ်မှတ်တဲ့ အချိုးအစားတစ်ခု ထည့်သွင်းပြီးတော့ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေလည်း လုပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ NLD ပါတီက လူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ်ကို ပြင်ဆင်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ပါတီစတည်ထောင်ကတည်းက စပြီးတော့ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် လေ့ကျင့်ခဲ့ပါပြီ။ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီ NLD က လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ NLD လူငယ်ထဲကနေ ဒီနေ့ လူကြီးတာဝန်တွေ ယူလာရတဲ့ မျိုးဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ NLD ပါတီဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်မှာ မှီခိုပြီးတော့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ပါတီ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စပြီးတော့ NLD ပါတီ တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှု၊ ၁၉၈၈ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ အလွှာအသီးသီးတော့ တတ်သိပညာရှင်တွေ၊ တပ်မတော်သားဟောင်း မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ၊ အထွေထွေသမဂ္ဂတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်သူတွေ အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စားပြုသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ NLD ပါတီအနေနဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ တာဝန်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပါတီဖွဲ့စည်းပုံကို ကျနော်တို့ တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါတီတွင်းမှာ ပါတီညီလာခံတွေကို အဆင့်ဆင့် ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့ ပါတီညီလာခံတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီပါတီညီလာခံတွေကနေပြီးတော့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဗဟိုကော်မတီ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အထိ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါတီကို မူဝါဒကို အခြေခံပြီးတော့သာ တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် အဲဒီမူဝါဒတွေ ကောင်းမွန် မှန်ကန်နေတယ်၊ အများရဲ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် သဟဇာတဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ပါတီရဲ့ ရပ်တည်ရေးနဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်က စနစ်တကျ ဆက်လက်ပြီးတော့ သွားနေနိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ဆိုတော့၊ ကျနော်တို့ စာနဲ့ရေးသားပေးပို့ကြတဲ့ နေရာမှာ တချို့မေးခွန်းတွေက မေးမယ့်ပါတီချင်းလည်း တူတယ်၊ မေးမယ့်အကြောင်းအရာကလည်း တူနေတာမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင် ကျနော်တို့က ပေါင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ တချို့မေးခွန်းမေးထားပြီး မပါခဲ့သည်ရှိရင် ကျနော်တို့ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ကျနော်တို့ကလည်း အချိန်အကန့်အသတ်ကလေးမှာ အဲဒီလိုမျိုး ပါတီတူတာလေးတွ၊ အကြောင်းအရာတူတာလေးတွေ ပြန်စုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ပါတီဘက်က ပြန်ဖြေသွားတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်ကို တိုက်ရိုက်မဖြေဘူးဆိုပေမယ့် နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြေထဲမှာ ကိုယ်မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းလေးလည်း ပါသွားမှာပါလို့၊ အဲဒီလိုလေး နားလည်စေချင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အခု ဒီမှာ သင်းသင်းဇော် (သာကေတ) က မေးပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းမှာ အခြေခံလူတန်းစားက များသလို၊ လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ဘဝမျိုးတွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဘာလို့ ထင်ပါသလဲ၊ ဘယ်လိုပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသလဲတဲ့။ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကို မေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ ရန်ကုန်မြို့မှာမှ အခြေခံလက်လုပ်လက်စားတွေ များတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျမတို့က လူလတ်တန်းစားကနေပြီး အောက်ကိုကျလာပြီးတော့မှ လက်လုပ်လက်စားတွေ များလာတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့ပဲကို ကျမတို့ ဖြေရမယ်ဆိုရင် တကယ်တမ်းတော့ Ano ang employment rate ကို ကျမတို့ လျှော့ချဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကို လျှော့ချမယ်ဆိုရင် သာမန်အနေနဲ့ လျှော့ချလို့မရပါဘူး။ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးခွင့် ကျမတို့ ရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ ပထမပိုင်းတော့ ကျမတို့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေက လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ နှေးကွေးသွားပြီ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြီး တက်လာနိုင်တယ်။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ ကျမတို့က ဈေးကွက်ဖြည့်တင်းမှုပေါ့နော်။ အလုပ်သမား အလုပ်အကိုင် ရရှိဖို့ ဈေးကွက်ဖြည့်တင်းမှုရပြီဆိုရင်တော့ ကျမတို့က အစိုးရကနေပြီးတော့ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးတွေ လုပ်လာဖို့ အများကြီးလိုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးဖို့သည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှာ တာဝန်ရှိသလို၊ ဗဟိုအစိုးရမှာလည်း ကျမတို့က မြို့ပြနဲ့ကိုက်ညီသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ကျေးလက်နဲ့ကိုက်ညီသော အလုပ်အကိုင်များ အဲဒါမျိုးတွေကို ကျမတို့ ဖန်တီးပေးမှသာလျှင် လက်လုပ်လက်စားတွေရဲ့ ပြဿနာဟာ အလုပ်လိုချင်ရင် လူတိုင်းအလုပ်အကိုင် ရရမယ်ပေါ့နော်။ ကျမတို့ ပါတီမှာဆိုရင် ကတိကဝတ် ၁၂ ချက်မှာဆိုရင် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အလုပ်အကိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိပြီး လုပ်ကိုင်လိုတဲ့သူတွေဆိုရင် အလုပ်အကိုင် ရရှိဖို့ အာမခံထားပါတယ်။ ဒါက ကျမတို့ မြို့ပြမှာရှိနေတဲ့၊ ကျေးလက်မှာရှိနေတဲ့ လိုအပ်ချက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီးပေးမယ်လို့ ကျမတို့ ကတိပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကျမတို့ ဖြေရှင်းပေးပါမယ်လို့ ကျမရှင်းပြချင်ပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ထပ်တစ်စောင် ရှိပါတယ်။ မယဉ်မေဦး (တောင်ဒဂုံ)။ ဆိုတော့ ဒါကလည်း ခုနက မေးခွန်းနဲ့ ဆင်တူရိုးမှားဆိုပေမယ့် ပါတီမတူတဲ့အခါကျတော့ အဖြေတစ်မျိုး ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေအတွက် ကိုဗစ်ပြီးရင်တဲ့၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဘယ်လိုလုပ်ပေးဖို့ ရှိပါသလဲတဲ့။ လူငယ်တွေအတွက် ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဝေးသင်စနစ်ကို အခုထက်ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးဖို့ရှိပါသလားဆိုပြီး ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကို မေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါရှင့်။ ကိုဗစ်ကာလမှာ၊ ကိုဗစ်ကတော့ ဘယ်တော့ ပြီးမလဲ မသိဘူးပေါ့နော်။ ကိုဗစ်ကြောင့်မို့လို့ ရှိရင်းစွဲအလုပ်အကိုင်တွေ ပိတ်ထားရတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ကျောင်းတွေလည်း ပိတ်ထားရတယ်။ ကျောင်းပြီးခါစ လူငယ်တွေလည်း အလုပ်အကိုင် ရှာမလို့ဟာ အလုပ်တွေက ပိတ်ထားရတဲ့ အခါကျတော့ လူငယ်တွေအတွက်ကို စိန်ခေါ်မှု သိပ်ကိုမှများတဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီ ကိုဗစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အခုဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့တွေက Work from home ပေါ့နော်။ အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်တယ်။ အခုတောင်မှ ကျမတို့ ရန်ကုန်တိုင်းတတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့၊ ဒီဗီဘီနဲ့ ကျမတို့ ပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာ အွန်လိုင်းမှာ ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်။ ဒါတွေက ကျမတို့က New normal လို ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ ဒါ ပုံမှန်အခြေအနေ အသစ်လိုဖြစ်လာတဲ့ အခါကျတော့ ကျမအနေနဲ့ ဒီ အဝေးသင်ပညာရေးကို ဒီလို နည်းပညာတွေ အသုံးချပြီးတော့မှ ထိထိရောက်ရောက် သင်ကြားဖို့ကို ဒါတွေက တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် တကယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း Ph.D ဘွဲ့ ၆ နှစ်ကို အွန်လိုင်းနဲ့ အမေရိကားက တက္ကသိုလ်နဲ့၊ အွန်လိုင်းနဲ့ တက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ်ကိုတော့ ၄ ကြိမ်ပဲ သွားရတယ်ပေါ့နော်။ လူအားဖြင့်တော့ ၄ ကြိမ်ပဲသွားရတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တကယ်ကို အရည်အသွေးပြည့်တဲ့ ပညာရေး ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါတွေက ကျမတို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ မော်ဒယ်တွေယူပြီးတော့မှ ကျမတို့က ကိုယ့်အိမ်ကနေ၊ ကိုယ့်ယာကနေ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ စာသင်တာပေါ့နော်။ အဝေးသင်တွေ။ အဓိကကတော့ ခုနက eGovernment လုပ်သလိုပဲ၊ ကျမတို့က အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မှ၊ တကယ့် အွန်လိုင်းအသုံးချပြီးတော့မှ အွန်လိုင်းကနေပြီး စာသင်တာတို့၊ စာမေးပွဲဖြေတာတို့ ဒါတွေကို ထိထိရောက်ရောက် တကယ် ဆောင်ရွက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါ မဆောင်ရွက်သေးတာကတော့ ကျမ နည်းနည်းတော့ အံ့သြတယ်ပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်၊ တစ်ခါတလေကျလို့ရှိရင် ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မိဘကနေပြီး တက္ကသိုလ်လွှတ်လိုက်တယ်။ အခုအချိန်မှာကျတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် မိဘတွေကနေ သားသမီးတွေရဲ့ လုပ်အားနဲ့လည်း ဝင်ငွေ လိုအပ်နေတဲ့ အခါကျတော့ သားသမီးတွေက အလုပ်လည်း လုပ်ရတယ်၊ ပညာလည်း သင်ရတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး လူငယ်တွေ များလာပါတယ်။ များလာတဲ့အချိန်မှာ ဒီ အွန်လိုင်း ပညာရေးပေါ့နော်။ အဝေးသင် ပညာရေးကို ကျမတို့က တကယ်ကို အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ တကယ်သင်ယူမှု၊ သင်ကြားမှု ကောင်းကောင်းနဲ့ တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားလို့ ရပါတယ်ရှင့်။ ဒါက လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် တကယ်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ဆီကို စာနဲ့ရေးသားပေးပို့ကြတဲ့ လူငယ်တွေကိုရော၊ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့ ပါတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရော အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ အခု တိုက်ရိုက် ပြန်လည်မေးခွန်းမေးမယ့်အစီအစဉ် စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက် အစီအစဉ်မှာတော့ ကျနော်တို့ နွယ်နီတင်မောင်ကနေပြီးတော့ ဆက်ပြီးတော့ တာဝန်ယူပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့၊ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ ဟိန်းထက်ဇော်၊ မောင်လေး မေးလို့ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မေးခွန်းမေးခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဦးတည်မေးမြန်းချင်ပါတယ်ဗျ။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးမြန်းချင်ပါတယ်။ ကျနော် လူငယ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ရော၊ ပြည်သူတချို့အနေနဲ့ရော ကျနော်တို့ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းလေးပေါ့နော်။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ သဘာဝဘေးစီမံဥပဒေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့အခါမှာ ဘက်လိုက်နေတယ်ဆိုပြီး ပြည်သူတွေက မြင်ကြတယ်ပေါ့နော်။ ဥပဒေ ကွက်ကျားမိုးရွာနေသလို ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့၊ ဒါက ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရော တရားဥပဒေရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ လူတိုင်း တန်းတူညီမျှမှု ရှိအောင် ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ NLD က ဆရာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တရားစီရင်ရေးက သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ မဏ္ဍိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က အစိုးရဆိုတာက အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်ရယ်၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ရယ်၊ ခုနက အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ရယ် … ဒီ မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ သီးခြား လွတ်လပ်စွာ ကျင့်သုံးပြီးတော့ အပြန်အလှန်စောင့်ကြည့် ထိန်းညှိလို့ပဲရပါတယ်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ မရပါဘူးခင်ဗျ။ အဲဒီအတွက် တရားစီရင်ရေးကို၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ကို တာဝန်ယူရတဲ့ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရဲ့ အောက်မှာရှိတဲ့ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်က တရားသူကြီးတွေကနေပြီးတော့ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်း ကျနော်တို့ အစိုးရက တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ ကြေညာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ တရားမျှတပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းသည့် တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို ထူထောင်ဆောင်ရွက်မည် ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဥပဒေပိုင်း ဆိုင်ရာမှာကတော့ ဥပဒေအချင်းချင်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ ခုနပြောတဲ့ ပဋိပက္ခဆိုတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆိုတော့၊ သူကတော့ တည်ဆဲဥပဒေက ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေအရ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အရေးပေါ် စီမံချက်ဥပဒေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ ဘယ်ဥပဒေကို ပိုပြီးတော့ အဓိကထားပြီး ယူဆမလဲဆိုတာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ တရားစီရင်တဲ့ တရားသူကြီးရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့နေရာတွေမှာ ပြည်သူတွေဘက်က ထင်ယောင်ထင်မှား၊ ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်၊ ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့ ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ တရားစီရင်မှုမှာက ကျနော်တို့က ဘက်လိုက်မှုကင်းပြီး မျှတတဲ့ တရားစီရင်မှု စနစ်ကိုပဲ NLD ပါတီက ထိန်းကျောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ညီမလေး စိမ်းသဉ္ဇာလတ်၊ မေးခွန်းမေးလို့ ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ မင်္ဂလာပါရှင့်။ ကျမကတော့ ပြည်သူ့ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်ဆရာကို မေးချင်ပါတယ်။ ဆရာတို့ပါတီကကျတော့ အဓိက ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အဓိကလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့ အဓိက ပူးပေါင်းပါဝင်ထားတာ ဆိုတော့လေ။ ပြီးတော့ ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမူဝါဒတွေလည်း ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအထဲမှာဆိုရင် အဓိက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ သက်ဆိုင်ပြီးတော့ မေးချင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာဆိုရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကိုလည်း လိုက်နာမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေလည်း ပါဝင်တယ်။ အဲဒီတော့ပေါ့နော်၊ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး စီစဉ်ထားလဲဆိုတာမျိုး သိချင်တယ်ပေါ့နော်။ ရှေ့မှာလည်း ဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကလည်း ဒီအထဲမှာ အများကြီး ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေတဲ့ NGO တွေ၊ လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ပြောနေတဲ့ ICC ဆိုတာကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ပြောနေတဲ့ အချက်တွေလည်း ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုမျိုး Redification လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ်ပြီးတော့ လိုက်နာမှုတွေလုပ်ရမယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ စီစဉ်ထားလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မေးခွန်းမေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီမလေးမေးသွားတာကတော့ ICC ၊ ဒီဟာကို ပြည်သူ့ပါတီကနေပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာ လိုက်နာသွားမယ် ဆိုတဲ့ဟာကို ရေးထားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကို မေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အစ်ကိုတို့ ပြည်သူ့ပါတီဆိုတာက ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးမှာ တောက်လျှောက် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ မျိုးဆက်အသီးသီးမှာ ရှိတဲ့သူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေကို အစ်ကိုတို့က သေသေချာချာ လေ့လာလိုက်နာဖို့အတွက် အစ်ကိုတို့က ပြင်ဆင်ထားတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံတကာက ဘယ်လိုဥပဒေမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကိုတို့က တိုင်းပြည်နဲ့ လျှော်ကန်သင့်မြတ်တဲ့ ဥပဒေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် အစ်ကိုတို့က ဒီလိုဥပဒေမျိုးတွေကို အစ်ကိုတို့ပါတီ အာဏာရခဲ့သည်ရှိသော်၊ သို့တည်းမဟုတ် အစ်ကိုတို့ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်မှာ ရောက်ခဲ့သည် ရှိသော်ပေါ့နော်၊ ဒီလိုဥပဒေမျိုးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနေပြီးတော့ လက်သင့်ခံ လက်မှတ်ထိုးအောင်၊ လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်အောင် အစ်ကိုတို့က ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပဲ ခပ်တိုတို ဖြေချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ မင်းမဟာ၊ မေးခွန်းမေးလို့ ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်၊ NLD ပါတီကို မေးချင်တာပါ။ ဒီ NLD ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်းမှာလည်း ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ လူငယ်များမှာ၊ ကျားမ လိင်စိတ် ကိုင်းညွှတ်မှုနဲ့ လိင်မှုအယူအဆ ခံယူမှုကိုသော်လည်းကောင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ကင်းရှင်းရန်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ ကြေညာစာတမ်းမှာ တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့၊ ဒီကြေညာစာတမ်းကို မှီငြမ်းပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် NLD အစိုးရအနေနဲ့ နောက်ငါးနှစ် ထပ်မံပြီး အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာ LGBT IQ တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အသိပညာ ဗဟုသုတတွေကို ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာ ပါဝင်လာဖို့အတွက်၊ သို့မဟုတ် ရေးဆွဲပြဌာန်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်၊ လုပ်ဆောင်မယ့် အစီအစဉ်တွေ ရှိလားဆိုတာကို သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ NLD က ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုလိုမေးခွန်း မေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ အနေအထား မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပိုပြီးတော့ ခေတ်နဲ့အညီပေါ့နော်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိလာလို့ ရှိရင်တော့ ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍကို တာဝန်ယူရတဲ့ လွှတ်တော် အသီးသီးရဲ့ တာဝန်ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးကတော့ ဒါ ပါတီရဲ့ မူဝါဒအတိုင်း နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံး အကျုံးဝင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ အစိတ်အပိုင်း အသီးသီးရဲ့ လူနည်းစုပေါ့နော်။ မတူညီတဲ့ အစိတ်အပိုင်း အသီးသီးမှာရှိတဲ့ အနည်းစုရဲ့ ရပိုင်ခွင့်နဲ့ ဘဝခံစားမှုတွေအားလုံးလည်း လျစ်လျှူမရှုဘဲ အမြဲတမ်း အလေးထားဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒ ရှိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ခုနကပြောတဲ့ LGBT အားလုံးရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ တန်းတူညီမျှ၊ ခွင့်တူညီမျှ ပါဝင်ခွင့်တွေ အားလုံးကိုလည်း ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ထည့်သွင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ဖို့။ ဒါက မလွှဲမသွေလုပ်လာရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုလို့ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ရှုမြင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း တချိန်မှာ ပိုပြီးတော့နော်၊ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပေါ့နော်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေထဲမှာပါ အထိ ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ အနေအထားပေါ့။ ဥပမာ - ဘဝတသက်တာ Life skills လို ဟာမျိုးတွေ၊ ဒါမျိုးတွေထဲမှာ ပါနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေလည်း တချိန်ချိန်မှာတော့ ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍက ခွင့်ပြုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဖြေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ အခုလိုမျိုး ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ ပါတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်တွေရော၊ မေးခွန်းမေးမြန်းပေးကြတဲ့ မောင်လေး၊ ညီမလေးတွေကိုရော ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပထမအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်အတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းအစီအစဉ် ဒုတိယပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ ကျမ နေရီရီနဲ့အတူ ဦးနေဇော်နိုင်နဲ့ နွယ်နီတင်မောင်တို့က တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ ဒီနေ့အစီအစဉ်အတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ဆူးလေစေတီတဝိုက်ကိုလည်း မြေဖို့လမ်းဖောက်ခဲ့တယ်။ Tent Square လို့ ခေါ်တဲ့ ဗန္ဓုလပန်းခြံလည်း ပါခဲ့တာပေါ့။ တချိန်က လျှော်တန်းလမ်းလို့ခေါ်တဲ့ ဆူးလေလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အခု Sule Square ဈေးဝယ်စင်တာကြီးကတော့ ရှေးဘုရင်ခေတ်က အာမေးနီးယန်း သင်္ချိုင်းနေရာပေါ့။ လသာလမ်းဆိုတာ တချိန်က ရန်ကုန်မြစ်ထဲစီးဝင်နေတဲ့ ချောင်းကြီးပါ။ အဲဒီချောင်းနဲ့အတူ မြောက်ဘက် ကပ်လျှက်ရှိတဲ့ ကျုံးကြီးကိုပါ မြေဖို့ပြီး ဆေးရုံအဖြစ် ၁၉၀၈ ခုနှစ်မှာ တည်ခဲ့တာ။ အဲဒီအရင်ကတော့ လေဟာပြင်ဈေးလို့ခေါ်တဲ့ နေရာမှာ သူနာတန်းလို့ခေါ်တဲ့ ဆေးရုံရှိခဲ့တယ်။ ၁၈၇၄ ခုနှစ်ကျော်အထိ ဆေးရုံကို သူနာတန်းလို့ သုံးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားတို့ သောက်သုံးရေအတွက် ကန်တော်ကြီးကို ယာယီအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် ၁၈၈၄ မှာတော့ ကုက္ကိုင်းရေလှောင်ကန်ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ မိလ္လာစနစ်ကိုတော့ ၁၈၈၉ ခုနှစ်မှာ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ Octavus Deacon Clark ဆိုသူက ဗိုလ်တထောင်လေမှုတ်စက်ကို လေအား၊ ရေအားနဲ့ လည်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ခဲ့တာ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမှ မရှိသေးတာကိုး။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်ရောက်မှ ဓာတ်ရထားလမ်းနဲ့အတူ လျှပ်စစ်မီးလည်း ရခဲ့တာ။ အဲဒီအချိန်ကာလဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အလှပဆုံးမြို့အဖြစ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တာပေါ့။ မြန်မာတို့ရဲ့ ဘောလုံးအားကစားကို အစပြုသူ ရွှေရိုး (ခေါ်) ဂျော့ချ်စကော့ရဲ့ The Burma စာအုပ်ကလည်း ကမ္ဘာကျော်ခဲ့လေတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အားလပ်ရက်မှာ အပန်းဖြေခရီးလာတဲ့ ဥရောပသား ဧည့်သည်တွေလည်း အများအပြားပါပဲ။ ၁၉၃၈ ခုနှစ် တတိယ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်မှာ ကိုအောင်ကျော်တို့ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အတွင်းဝန်ရုံးကိုတော့ ၁၈၈၉ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာ။ ဗိသုကာ ဟင်နရီ ဝှိုင်းဟောက်စ်ရဲ့ လက်ရာပေါ့။ တတိယကျောင်းသားသပိတ် မတိုင်မီကတော့ ၁၉၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ မင်းကြီးကတော် ဒေါ်မြမေ၊ အင်ဒီပင်းဒန့် ဒေါ်စန်းတို့ ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့က အတွင်းဝန်ရုံးပတ်လည်မှာ အမျိုးသမီးအမတ် ရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒပြခဲ့ဖူးရဲ့။ အတွင်းဝန်ရုံးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဗန္ဓုလမ်းပေါ်က အဆောက်အဦမှာတော့ သံမှူးလေးဖြစ်တဲ့ ချီလီနိုင်ငံသား နိုဘဲလ်ဆုရှင် ပတ်ဘလို နီရူဒါနဲ့ ကပြားမလေး ဂျွန်စီဘလစ်တို့ အချစ်ဇာတ်လမ်း စတင်ခဲ့ရာနေရာပေါ့။ ရန်ကုန်မြို့မှာ ကိုလိုနီခေတ်အတွင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦ ၂၀၀ ကျော် ရှိတာကြောင့် ကိုလိုနီအငွေ့လွှမ်းတဲ့မြို့လို့ ပြောဆိုကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ Any Questions? အဖွဲ့သားတွေ စုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ ရန်ကုန်ပုံရိပ် ဒုတိယပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလမှာ ကျနော်တို့ ဒီဗီဘီကနေပြီးတော့ ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ သူတွေ ရှိသလို၊ အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်ပေးကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ပထမပိုင်း ဒေသသုံးခုမှာ ကျနော်တို့ တင်ဆက်သူအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နွယ်နီတင်မောင်က အိမ်ကနေပြီးတော့ Any Questions? အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ပေးရပါတယ်။ အခု နွယ်နီတင်မောင်ကနေပြီးတော့ သူ့အိမ်ကနေပဲ ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးမယ့် လူငယ်တွေကို မေးပါလိမ့်မယ်။ နွယ်နီတင်မောင်၊ မေးလို့ရပါပြီ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ပထမဦးဆုံးမေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ ညီမလေး ချမ်းမြေ့သူပါ။ မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီ ညီမလေး။ မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ညီမက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို မေးချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အခုလာမယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ထပ်ပြီးတော့သာ အနိုင်ရခဲ့ရင် ပညာရေးစနစ်ကို ဘယ်လိုပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်အောင် လုပ်မှာပါလဲ။ ပြီးတော့ လူငယ်တွေအတွက်ရော ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းတွေ ပိုပြီးတော့ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာလဲ မေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သူကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မေးထားတဲ့အတွက် ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနှစ် ၃၀ စီမံကိန်း ရေးဆွဲပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆရာတို့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပညာရေး ဘက်ဂျက်တွေ အသုံးပြုမှုကိုလည်း ယခင့်ယခင် အစိုးရဟောင်းတွေက သုံးစွဲခဲ့တဲ့ အနေအထားထက် ၂ ဆ ပိုပြီးတော့ တိုးတက်လာအောင် သုံးစွဲမှုတွေက ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ယူတဲ့ကာလမှာ ပညာရေးကို ဘာပြောင်းလဲခဲ့သလဲ ဆိုရင် လူငယ်အများစုဟာ တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဆက်စပ်မှုရှိရေးကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးကို ပိုပြီးတော့ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခုလည်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ ပညာရေးက အရှိန်အဟုန် ရလာပြီဆိုတော့ နောင်လာမယ့် ၅ နှစ်သက်တမ်းအတွင်းမှာ အကယ်၍ ဆက်လက်ပြီးတော့ တာဝန်ယူခွင့် ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍကို ယ္ခင်ထက် အထူးပိုမို ဦးစားပေးပြီး မြှင့်တင်ဖို့လည်း နိုင်ငံကိုလည်း ချပြထားပြီးသား၊ လက်တွေ့လည်း အကောင်အထည် ဖော်ပြီးသားဖြစ်တော့ အရှိန်အဟုန် သိသိသာသာ မြင့်မားလာတာကို ခံစားရမှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီတော့ တခြားဆက်ပြီးတော့ နောက်ဆက်တွဲ မေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဖြေပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ နောက်ထပ် မေးမယ့်တစ်ယောက် ရှိပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အောန်ဆန်းပါ။ ညီမလေး မေးခွန်းမေးလို့ ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ မင်္ဂလာပါရှင့်။ ညီမကတော့ပေါ့နော်၊ ပြည်သူ့ပါတီက ဆရာကို မေးချင်တာပေါ့နော်။ အခု ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ ကြေညာစာတမ်းကို ညီမ ဖတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်။ လူငယ်ရေးရာမူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြောထားတာတွေ ရှိတယ်။ လူငယ်တွေအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာတွေ ဆောက်ပေးဖို့ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ညီမ အဲဒီအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလေး မေးချင်တာက ဒီ စင်တာဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်၊ လူငယ်စင်တာမှာ လူငယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လို အသိပညာပေးတာကို၊ လူငယ်တွေက လာပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆွေးနွေးမှာတော့ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာအပိုင်းကို ဒီချယ်နယ်တွေက အဓိက ပေးမှာလဲ၊ ပညာပေးမှာလဲ ဆိုတဲ့အပိုင်းရယ်၊ ပြီးသွားတော့ ဒီလိုစင်တာတွေ ဆောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် ဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်။ ဘတ်ဂျက်က နိုင်ငံတော်က ထုတ်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားက အထောက်အပံ့ကို ယူမှာလား။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ ရေရှည် စင်တာတွေ တည်တံ့နိုင်ဖို့ဆိုရင် ထောက်ပံ့မှုကကော ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ သွားမှာလဲပေါ့နော်။ အမြဲတမ်း အစိုးရကပဲ ဘတ်ဂျက် ထုတ်ပေးနေမှာလား။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ နေရာပေါ့နော်။ သူက ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးမှာ ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ နေရာဆိုတာကကော ဘယ်နေရာကနေ စပြီးတော့ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာတွေကို စလုပ်ပေးမှာလဲပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတော့ ညီမတို့လို ရန်ကုန်က လူငယ်တွေက ဒီဟာတွေက ဆောက်လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသော်ငြားလည်း၊ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်လိုနေရာတွေ၊ ရှမ်းလို၊ ကချင်မှာဆိုလည်း လူငယ်တွေ … သူတို့လည်း လူငယ်တွေပဲပေါ့နော်။ သူတို့အတွက်ကော ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာ ရှိလဲပေါ့နော်။ ဒီ နေရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ကော ဘယ်မှာစပြီးသွားမှာလဲ။ ပြီးတော့ အသီးသီးမှာ ဆောက်လုပ်ပေးမယ် ဆိုတော့ပေါ့၊ ဒီ အစီအစဉ်ကြီးက ရေရှည်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်ခုနှစ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ရောက်နေရမယ် ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းများ ရှိလားပေါ့နော်။ အဲဒါလေးကို သိချင်တာပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သူကတော့ ပြည်သူ့ပါတီကို မေးထားတဲ့အတွက် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ မေးခွန်းမေးတဲ့ ညီမလေး ကျေးဇူးပါ။ ညီမလေးပြောသလိုပဲ စင်တာတွေကို ဆောက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာပေါ့နော်၊ လူငယ်တွေအတွက် နေရာဖန်တီးပေးရာမှာ ဘာတွေကို အဓိက ဒီစင်တာတွေမှာ ထားပေးမလဲ၊ ဘယ်လိုအစီအစဉ် လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ စင်တာတွေကတော့ အဓိက လူငယ်တွေရဲ့ စုစည်းရာလည်း ဖြစ်မယ်၊ နောက် ခုနကပြောသလို အသိပညာ ဖလှယ်ရာလည်း ဖြစ်မယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေ ဖလှယ်ရာလည်း ဖြစ်မယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ကတော့ အသိပညာချင်း ဖလှယ်တဲ့ နေရာဖြစ်သလို၊ ခုနကပြောသလို လူငယ်တွေအတွက် လေ့လာသင်ယူစရာ နေရာလည်း ဖြစ်အောင် အစ်ကိုတို့က ဖန်တီးရမှာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ဒီစင်တာတွေကို ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအသီးသီးမှာ ဆောက်မယ်၊ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ဆောက်မလဲဆိုတော့ ဒါက အစ်ကိုတို့က အစိုးရတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွယ်မယ် ဆိုတဲ့ မူဝါဒကို ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာ ဖော်ပြရတာ ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကျတော့ အခု ဒီ လက်ရှိ ရှေ့မှာ လူငယ်မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရက ချမှတ်ထားတဲ့ဟာရော၊ အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်လို့ ချမှတ်ထားတဲ့ ဟာရောမှာက ဘာတွေပါနေလဲ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီမှာလည်း လူငယ်စင်တာတွေကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတွေကနေပြီးတော့ ဒီ လူငယ်စင်တာတွေမှာရှိတဲ့ Facility တွေ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပံ့ပိုးပေးရမယ်ဆိုပြီး ပါတယ်။ အစ်ကိုတို့ပါတီကလည်း တကယ်လို့ အစိုးရဖြစ်ခဲ့ပြီ၊ လူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရလာခဲ့ပြီ ဆိုလို့ရှိရင် အစ်ကိုတို့ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ လူငယ်တွေအတွက်ကို ဒီစင်တာတွေ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးမှာပေါ့၊ ပြည်နယ် ပြည်မမရွေး အားလုံးတန်းတူ ကျနော်တို့က သူတို့တွေ ဒီဟာတွေကို လက်လှမ်းမီအောင် စီမံကိန်းချပြီး ဆောင်ရွက်မယ်။ ဆောင်ရွက်ပြီးလို့ရှိရင် ဒီအတွက် သုံးရမယ့် ဘတ်ဂျက်တွေကိုလည်း အစိုးရကနေပြီးတော့ ကျခံပြီးတော့ သုံးစွဲနိုင်အောင် စီမံသွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်ရော ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ သေချာတယ်၊ စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ အစ်ကိုတို့ စင်တာတွေ သွားဆောက်လို့ မရဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ သေချာတယ် သူတို့ကို ဒီအတိုင်းပစ်ထားတာတော့ အစ်ကိုတို့တတွေ ဘယ်လိုမှ မသင့်လျော်ဘူး။ မသင့်လျော်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒေသမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်လည်း စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒေသမှာတော့ စင်တာသွားဆောက်ပေးလို့ မရဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ဒီလိုလူငယ်တွေအတွက်ကို၊ လူငယ်မူဝါဒမှာလည်း ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ ဒီလို စစ်ဖြစ်တဲ့ ဒေသမှာရှိတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်ရော၊ မိဘမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ရော ဒါတွေအတွက်ပါ စဉ်းစားပြီးတော့ အစ်ကိုတို့က ဒီလူငယ်တွေလည်း ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ လက်လှမ်းမီနိုင်အောင်၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ လက်လှမ်းမီလာအောင် အစ်ကိုတို့က ဒီလိုစင်တာတွေကနေပြီးတော့ ဖန်တီးပေးသွားဖို့ အစ်ကိုတို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် မောင်လေးတစ်ယောက်ကတော့ ကံဘုန်းခန့်ပါ။ မောင်လေး မေးခွန်းမေးလို့ ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ ကျနော့်မေးခွန်းကတော့ အဓိကအားဖြင့် ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP က အန်တီဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ ရန်ကုန်မြို့ဟာ စီးပွားရေးအချက်အချာကျတဲ့ မြို့ဖြစ်သလို၊ တပြည်လုံးက စုံလင်တဲ့ Social economic status မတူညီတဲ့သူတွေ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Social economic status ကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လက်လုပ်လက်စားတွေရှိမယ်၊ အလုပ်သမားတွေကစလို့ အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ပါပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ ရန်ကုန်တိုင်းပြင်ပက နယ်မြို့တွေ၊ တိုင်းဒေသကြီးတွေကလာတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ လက်လုပ်လက်စားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ မေးချင်တဲ့အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့မှာ အလုပ်အကိုင်တွေ ရှိသော်ငြားလည်း သူတို့ အလုပ်အကိုင်မှာ ရရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ သူတို့အလုပ်အကိုင်မှာ ရရှိတဲ့ ပါဝင်မှုတွေ၊ သူတို့ အလုပ်အကိုင်မှာ ရရှိလာတဲ့ မတူညီမှုတွေအပေါ် မူတည်ပြီး မေးချင်တာပါ။ သူတို့အတွက် နေရေးထိုင်ရေး ပြဿနာကအစ လုပ်ငန်းတွေမှာ မမျှမတ ဆက်ဆံခံရမှုတွေအထိ ပြဿနာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြားမှာရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးကအစ ပြဿနာတွေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီကိုဗစ်ကာလမှာ ဆိုရင် နယ်မြို့တွေကလာတဲ့၊ အထည်ချုပ်တွေမှာလုပ်တဲ့၊ စက်မှုဇုန်တွေမှာလုပ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဆိုရင် လစာဖြတ်တောက်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းက တာဝန်ကနေ ရပ်ဆိုင်းခံရတဲ့ ပြဿနာတွေ အထိ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီလိုမျိုး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုပြဿနာတွေ၊ လစာပြဿနာတွေအတွက် ဘယ်လိုမျိုး မူဝါဒတွေကို ပြဌာန်းပြီးတော့ ကာကွယ်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သူကတော့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကို မေးထားတဲ့အတွက် ပြန်လည်ဖြေကြား ပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်၊ ကျေးဇူးပါရှင့်။ မေးတာတွေကတော့ နည်းနည်းတော့ များတယ်ပေါ့နော်။ နံပါတ်တစ်ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်။ အဲဒါလေးလည်း ပြောပါရစေ။ အဲဒါကတော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကုမ္ပဏီပေါ်လစီတွေဘာတွေနဲ့ Employment concept ပေါ့နော်၊ သေချာလုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ရမှာတွေရှိတယ်။ သို့သော်လည်း အခုအချိန်မှာတော့ ကိုဗစ်နိုင်တင်း ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ငန်းတွေလည်း ရပ်ထားရတယ်၊ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဝင်ငွေမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားဆိုတာ ကျမတို့ အယူအဆကတော့ တလှေတည်းစီး တခရီးတည်းသွား ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီ အလုပ်ရှင်တွေ စီးပွားရေး အဆင်ပြေရင် အလုပ်သမားတွေလည်း အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုတာကိုလည်း ကျမတို့ပါတီရဲ့ လူထုဘဝ အဓိက လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်ထဲမှာ ထည့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကျမတို့ အဓိကလုပ်ချင်ပါတယ်။ အဓိကကကျတော့ ဘာလဲဆိုတော့ စီးပွားရေးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ များမှ၊ လူတွေအလုပ်ရတဲ့ အချိန်မှ၊ လူတိုင်းအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ဝင်ငွေ၊ ထိုက်တန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ လူတိုင်းအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီး စိတ်ချလုံခြုံတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူလူထုတွေက ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ကတော့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်၊ အခုလိုမျိုး ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ ပါတီအသီးသီးက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကော၊ မေးခွန်းမေးမြန်းပေးသွားတဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတွေကိုကော ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုဆက်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ မေးမြန်းကြမယ့် ကလေးတွေရဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်တဲ့အတွက် မေးခွန်းမေးမယ့် ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးမယ့် ကလေးတွေကို ဖိတ်ခေါ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ ညီမလေး မေနဒီပေါ့နော်။ ညီမလေး မေနဒီ မေးခွန်းမေးလို့ ရပါပြီ။ မေး။ ။ သမီးနာမည်ကတော့ မေနဒီဖြစ်ပါတယ်။ သမီးက နားမကြားကလေးတစ်ယောက်ပါ။ အခုလို တွေ့ဆုံပြီးတော့ ပြောရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ သမီးကအခု ဆယ်တန်းမှာ ပညာသင်နေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ အခုလိုပါဝင်ပြီးတော့ ပြောဆိုရတာကို အရမ်းပျော်ပါတယ်။ စာသင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစားပြီးတော့ သင်ယူတယ်။ အခု မေးချင်တာက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ကိုယ်စားလှယ်ကို မေးချင်တာပေါ့နော်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် သမီးတို့ နားမကြားကလေးတွေအတွက် ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ နောက် အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်၊ အခွင့်အရေးတွေ အခွင့်အလမ်းတွေ ရလာအောင် ဘယ်လိုတွေများ လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦး ဖြေပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ မင်္ဂလာပါသမီးရေ။ သမီးက ဆယ်တန်းအထိ ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အလွန်ပဲ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆရာတို့ပါတီရဲ့ ပညာရေးမူဝါဒထဲမှာလည်း ပါပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ မသန်စွမ်းလူငယ်များအပါအဝင် ကလေးများအားလုံးရဲ့ ပညာရေး ဆိုပြီးတော့ကို မသန်စွမ်းကလေးများအားလုံးအတွက် ပါဝင်အောင်၊ အကျုံးဝင်အောင်လို့ ဆရာတို့က ဒီစကားရပ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အားလုံးအတွက် ပညာရေးလို့ ပြောတဲ့အတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံသားကလေးတွေ အားလုံးရဲ့ ပညာရေးကို ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Formal Education၊ Informal education ၊ Non – formal education ပေါ့၊ ဒီကဏ္ဍကြီး သုံးမျိုးစလုံးအတွက်။ ဗမာလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ သမားရိုးကျ ပညာရေး၊ နောက်တစ်ခုက သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ ပညာရေးနဲ့ အထူးသီးသန့်ပညာရေးကဏ္ဍ သုံးခုစလုံးမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ မသန်စွမ်း ကလေးငယ်များ အားလုံးရဲ့ ပညာရေးကို အကျိုးဝင်အောင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်ပေးနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း မသန်စွမ်းအဖွဲ့ချုပ် MILI နဲ့ ဆရာတို့ပါတီနဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေလည်း မကြာခဏ လုပ်ဖူးပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ မသန်စွမ်းအဖွဲ့ချုပ်နဲ့လည်း အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ ဒီ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေ အများကြီးလုပ်ဖူးပါတယ်၊ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့။ ပြီးရင် တစ်ခါ၊ မသန်စွမ်း ကလေးငယ်တွေ ပညာပြီးဆုံးသွားတဲ့ အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ကဏ္ဍ အသီးသီးကနေ နိုင်ငံ့တာဝန်တွေ စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့၊ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း ထပ်မံပြီးတော့ စီမံရေးဆွဲထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း အမြဲတမ်းပိုပြီးတော့ အားပေးကူညီဖို့လည်း အမြဲတမ်း အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆရာတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမတ်တွေထဲမှာတောင်မှ မသန်စွမ်းလူငယ်တွေ ပါဝင်ပြီးတော့ ဒီနေ့ လွှတ်တော်တက်နေတဲ့ အမတ်တွေ ရှိနေပါပြီ။ ဆိုလိုတာက ဒါကြောင့် မသန်စွမ်းကလေးများ အနေနဲ့၊ မသန်စွမ်းလူငယ်များ အနေနဲ့ ဘာမှစိတ်အားငယ်စရာ မရှိပါဘူး။ အားလုံး ကျန်တဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ အတူတူပဲ ဒီနိုင်ငံမှာနော်။ အတူတူနေထိုင်မယ်၊ အတူတူ သင်ယူမယ်၊ အတူတူ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ အပြည့်အဝ ရှိတယ်ဆိုတာကို ဆရာ ဖြေကြားချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီဘက်က မေးပေးသွားတဲ့ ညီမလေးကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်။ ညီမလေးရဲ့ အမေကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။ အခု နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မောင်လေး မောင်ကျော်မင်းအောင်ပေါ့နော်။ မောင်လေး မေးခွန်းမေးလို့ ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ PPP ပါတီ၊ အန်တီဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကို မေးချင်တာပါ။ ကျနော်တို့ လူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးကွဲတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ လောလောဆယ် ကျနော် လက်ရှိကျနော်တို့ ခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာက ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေနဲ့အညီ မှတ်ပုံတင်တွေ ကျနော်တို့ကို လုပ်ပေးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေအတွက်က တော်တော်လေးကို ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေက နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဥပဒေနဲ့ ညီပေမယ့်လည်း ငွေရေးကြေးရေးမတတ်နိုင်တဲ့ အတွက်ကို ကျနော်တို့ ပြုနိုင်ငံသားတို့၊ ဧည့်နိုင်ငံသားတို့ ထုတ်ပေးနေတဲ့ လဝက ရုံးတွေ အမြောက်အများ ရှိတယ်ပေါ့။ ဆိုတော့ အန်တီတို့အနေနဲ့က တကယ်လို့ ဒီ ၂၀၂၀ မှာ အနိုင်ရပြီး အစိုးရသာ ဖွဲ့နိုင်ခဲ့မယ်၊ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေအတွက်ကို ဘယ်လိုမျိုး မှတ်ပုံတင်ကိစ္စတွေ စီစဉ်ပေးထားလဲ။ နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ သိချင်တာက ကျနော်တု့ိ လူမျိုးတွေရဲ့ အဓိကအခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက အဓိက အုတ်မြစ်က မှတ်ပုံတင်ပဲ။ ကျနော်တို့ ပညာတွေ အကြီးကြီးသင်ဖို့၊ ဘွဲ့လက်မှတ်ထုတ်ဖို့ကလည်း မှတ်ပုံတင်ရဖို့ လိုအပ်တယ်။ အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက်ကိုလည်း မှတ်ပုံတင်ရဖို့က လိုအပ်တယ်။ နေရာတကာမှာပေါ့၊ မှတ်ပုံတင်က အရေးကြီးနေတယ်ပေါ့။ ဆိုတော့ အန်တီတို့အနေနဲ့ကို ကျနော်တို့က သိချင်တာ ဒီလွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားရင် အန်တီတို့ အနေနဲ့ သားတို့ကို ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာလေးပေါ့။ စဉ်းစားထားတာကော ရှိလား။ အဲဒါလေး သားသိချင်ပါတယ်။ ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ မှတ်ပုံတင်မရတဲ့ ကိစ္စပါရှင့်။ ကျမ ကိုယ်ချင်းစာနာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နေတာကြာပြီ။ မျိုးဆက် နှစ်ခုသုံးခုရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူး၊ မှတ်ပုံတင် မရသေးဘူးပေါ့နော်။ အဲဒါတွေက လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားမှ ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ အခု ကျမတို့ မဲတစ်ခါတစ်ခါ ပေးတော့မယ် ဆိုလို့ရှိရင်၊ ၂၀၁၅ တုန်းကလည်း ကျမ ကြုံဖူးပါတယ်။ ၂၀၂၀ မှာလည်း အခု ကြုံနေရပါတယ်။ မဲတော့ပေးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မှတ်ပုံတင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ တကယ့် တိုင်းရင်းသားအစစ်တွေပေါ့နော်။ အဖေကော၊ အမေကောက မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးတော့မှ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်တာတောင်မှ မှတ်ပုံတင်မရသေးတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်ရှင့်။ ရှိတဲ့အခါကျတော့ ဒီလိုမျိုးလူတွေတောင် ရှိနေတာ၊ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေ ရှိတယ်ဆိုတာလည်း ဒါ မဆန်းပါဘူးရှင့်။ မဆန်းတော့ ကျမတို့က ဒီဟာသည် ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Administrative problem ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကနေပြီးတော့မှ Public adminitration အရ ဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ ပါတီအနေနဲ့က ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်းပေါ့နော်။ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာက နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးတာလည်း ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်တယ်၊ နောက် တခြားကိစ္စတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါကြောင့် ကျမတို့ကတော့ eGovernment ကို တအားသွားချင်ပါတယ်။ eGovernment ၊ နောက်ပြီး ပထမဆုံးတော့ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကို eID ၊ နောက် စမတ်ကတ်တွေနဲ့ ဒီလို စာရင်းတွေ သေချာပြုစုပြီးလို့ရှိရင် ဒီမိဘကနေ မွေးဖွားတယ်၊ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ အဖေ အမေ နိုင်ငံသားက မွေးဖွားလို့ သားသမီးလည်း နိုင်ငံသားဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ ဆိုလို့ရှိရင် သက်သေတွေကို၊ ထောက်ခံစာတွေကို ပတ်ပြီးတော့ ယူနေစရာမလိုဘဲနဲ့ eGovernment ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါ အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုကိုလည်း တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်၊ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း ပိုကောင်းလာမယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ ပါတီအနေနဲ့တော့ eGovernment ကို လုပ်ဖို့ကို သိပ်ကိုမှ ဆန္ဒပြင်းပြပါတယ်ရှင့်။ အဲဒီအထဲမှာ ဒါ လူ့အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်တယ်၊ နိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး ပေါ့နော်။ ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့ ဒီအဖေအမေက မွေးဖွားတယ် ဆိုလို့ရှိရင်၊ ဒီနိုင်ငံသားက မွေးဖွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေါ့။ ပြီးလို့ရှိရင် ၁၉၈၂ ဥပဒေနဲ့ ညီပြီးတော့မှ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရှိတဲ့သူတိုင်းကို နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ရတာပေါ့နော်။ အဲဒီလို မှတ်ပုံတင် ရမှသာလျှင် ပညာရေးတွေ၊ ကျန်းမာရေးတွေ၊ ပြီးလို့ရှိရင် ယုတ်စွအဆုံး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေဘာတွေ ထုတ်ပြီး နိုင်ငံတကာကိုသွားပြီး ပညာသင်တာတို့၊ အလုပ်လုပ်တာတို့ ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျမတို့ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ ဖြစ်သလို၊ ကျမတို့က Administrative issue ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့က ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီတော့လေ၊ ဒီမေးခွန်းကိုပဲ ကျမတို့က ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီက ဒေါ်စုစုလှိုင်ကိုလည်း ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစ်မတို့ ပါတီအနေနဲ့ရော ဒီလို နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေပေါ့နော်၊ ဘာသာခြား လူနည်းစုတွေမှာ ဒီလို မှတ်ပုံတင်တွေ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီအနေနဲ့များ အနိုင်ရခဲ့ရင်၊ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားခဲ့ရင်ပေါ့နော် ဘာတွေများ လုပ်ပေးဖို့ ရှိလဲပေါ့။ အဲဒါလေးကို မေးချင်ပါတယ်ရှင့်၊ UBP ပါတီကိုလည်း၊ ဟုတ်ကဲ့။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျမတို့က အစကတည်းကလည်း ပြောထားပါတယ်၊ ပါတီက။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးစေရဘူးပေါ့နော်။ နိုင်ငံသားရဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးထဲမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားတယ်၊ ဖြစ်တည်လာတဲ့အခါမှာ ကျမတို့က နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ပေးကိုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ခုနက မှတ်ပုံတင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ လိုင်စင်ကိစ္စတွေကိုလည်း ကျမတို့ ကတိကဝတ် ၁၂ ချက်ထဲမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရမယ်ဆိုတာတွေကို ကျမတို့ ဖြည့်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတော့ ဒီလိုလေးပဲ တိုတို ဖြေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးပါ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ မေးခွန်းမေးတာလေးတွေရဲ့ ကြားထဲမှာ၊ နောက်ထပ် မေးခွန်းမမေးခင်လေးမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်တချို့ကို ကျနော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှာ မဲရရှိမှု အခြေအနေနဲ့ မဲပေးသူ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ၂၀၁၅ တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် ဒီ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှာ ၆၅.၄၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှာ ပါတီအလိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတော့ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပါတီက ၂၉ ပါတီ ရှိပြီးတော့ အနိုင်ရတဲ့ ပါတီက ၂ ပါတီ ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပါတီ ၂၀ ရှိပြီးတော့ အနိုင်ရတဲ့ ပါတီ ၁ ပါတီ ရှိပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပါတီ ၂၉ ပါတီရှိပြီးတော့ အနိုင်ရတဲ့ပါတီ ၂ ပါတီ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ ၂၀၁၅ ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျနော်တို့ DVB Any Questions? အတွက် ကျနော်တို့ ဖောင်ဖြည့်ပြီးတော့ အချက်အလက်တွေ ကောက်ယူတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ စစ်တမ်းကို ဖြေဆိုကြတဲ့သူတွေက အမျိုးသား ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်၊ အမျိုးသမီးက ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြားပေါ့လေ … အဲဒါကတော့ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာပဲ ကျနော်တို့ ပထမအကြိမ် မဲပေးမယ့်သူကတော့ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပြီးတော့ အဲဒီအထဲမှာ ဗမာက ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ် တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့က ဒီဗီဘီစစ်တမ်း ဖြေဆိုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကျနော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ စစ်ဆေးကောက်ခံတဲ့အခါမှာ မသန်စွမ်း ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ သန်စွမ်းသူတွေကတော့ ကျနော်တို့ ၉၀ ကျော် ပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာပဲ ကျနော်တို့ အကြားအာရုံ မသန်စွမ်းတဲ့ သူတွေက ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ် မသန်စွမ်းကတော့ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ကျနော်တို့က ပါတီတွေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအလိုက် သူတို့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကျနော်တို့ စစ်တမ်းကောက်ယူပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျနော်တို့ စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာ ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့မှုကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုထားတာက ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးအတွက်ကတော့ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ နောက် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြို့ပြစီမံကိန်း၊ မြေယာပြဿနာများအတွက်ကတော့ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ စည်ပင်သာယာရေး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာကတော့ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ဆိုပြီးတော့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုထားတာ တွေ့ပြီးတော့ ဒီအချက်အလက်တွေထဲမပါတဲ့ အခြားဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျနော်တို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ DVB Any Questions? ကနေပြီးတော့ ပြုစုထားတဲ့ အချက်အလက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးပါရှင့်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ မေးခွန်းမေးပေးသွားတဲ့ မောင်လေးတွေ၊ ညီမလေးတွေနဲ့ ဒီဘက်က ဖြေပေးသွားတဲ့ ပါတီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အခု ကျမတို့ရဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ မေးခွန်း တိုက်ရိုက်မေးတဲ့ အစီအစဉ်ကို ဒီမှာပဲ ခဏနားခွင့်ပြုပါရှင်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပထမအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်အတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းအစီအစဉ် ပထမပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ ကျမ နေရီရီနဲ့အတူ ဦးနေဇော်နိုင်နဲ့ နွယ်နီတင်မောင်တို့က တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်မြို့ဟာ မြန်မာ့သမိုင်းစာအုပ်လည်း ဖြစ်တယ်၊ ဖြတ်သန်းရာခေတ်တွေလည်း ဖြစ်တယ်၊ ဥက္ကလာပ ပြည်လည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ဗိုလ်တစ်မင်း စစ်ခင်းခဲ့တဲ့ စစ်ပဒေသရာဇ်တို့ရဲ့ တောင်ငူခေတ်၊ ဟံသာဝတီခေတ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်တို့ကိုလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ ကိုလိုနီလက်အောက်လည်း နေခဲ့ဖူးတယ်၊ သမိုင်းတလျှောက် စစ်တလင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ယမ်းနံ့တွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းခဲ့ဖူးသလို၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့ ဆည်းလည်းသံနဲ့လည်း ကြည်နူးခဲ့ရဖူးတယ်။ ဓမ္မရနံ့နဲ့ မေတ္တာပန်းတို့ မွှေးပျံ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ခေတ်ကာလ အသွေးအရောင်နဲ့ သမိုင်းရေးအမြင်တွေပြည့်နေတဲ့ မြို့တော်ကြီး တစ်ခုပါပဲ။ ပုဂံခေတ်ကတော့ ရန်ကုန်ဟာ ဇနပုဒ်လေးတစ်ခုပေါ့။ ဒလဟာ ခံတပ်မြို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပုဂံနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံရာမြို့ပေါ့။ ရန်ကုန်ကို တံငါရွာလေးတစ်ခုမျှသာ ယူဆခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီဒေသကို ရန်ကုန်လို့ မခေါ်မီက မွန်တွေက လဂမ်းမြို့လို့ ခေါ်သတဲ့။ လဂမ်းမြို့ကို အခြေပြုပြီး ကိုးကွယ်ရာစေတီကိုလည်း ကျိုက်လဂမ်းစေတီလို့ ခေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ အေဒီ ၇၄၆ ကနေ စတင်အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ ပဲခူး၊ ဟံသာဝတီမင်း လက်ထက်မှာတော့ လဂမ်းမြို့ကို အရာမဏမြို့လို့ နာမည်ပြောင်းခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအမည်ဟာ မတွင်ကျယ်ခဲ့ပါဘူး။ သက္ကရာဇ် ၁၅၃၉ ထဲ ရောက်တော့ တပင်ရွှေထီးက လဂမ်းမြို့ကို သိမ်းပိုက်ပြီး မြို့ရွာအမည်တွေကို မြန်မာမှုပြုရာက လဂန်းမြို့ကို ဒဂုံမြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ကျိုက်လဂမ်းစေတီကိုလည်း ဒဂုံဆံတော်ရှင်ဘုရားလို့ ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းတချို့ကဆိုပါတယ်။ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်ကတော့ တြိကုမ္ဘ (Trikumba) အဲဒီက ဒဂုံသို့လည်းကောင်း၊ အဲဒီက လဂန်းသို့လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလာတယ်လို့ မွန်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ ကျိုက်လဂွန်းဓာတ်တော်မွေတော်သမိုင်းကို အခြေပြုပြီး ဖော်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ်တော့ လဂမ်းမြို့ခေါ် ဒဂုံမြို့ဟာ မိချိုဘုလို့ ငယ်မည်ရတဲ့ ရှင်စောပု ၁၂ နှစ်သမီးကတည်းက အပိုင်စားရခဲ့တဲ့ မြို့ပါ။ ဟံသာဝတီဘုရင်မကြီးအဖြစ် ထီးနန်းစိုးစံပြီးတဲ့နောက် ကျိုက်လဂမ်းစေတီတော်မြတ်ကြီး အနီးအနားမှာပဲ တရားအားထုတ်ရင်း ကံတော်ကုန်ရှာသတဲ့။ သူ ဘုရင်မကြီးအဖြစ် စိုးစံတာဟာ ဝိတိုရိယ ဘုရင်မကြီးထက် စောတာပေါ့။ ကျိုက်လဂမ်းစေတီတော်မြတ်ကို တိုးချဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံရင်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဘုရင်မရဲ့ သရဖူခေါင်းစောင်းတော်ကြီးကတော့ ပထမ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာစစ်အပြီး အင်္ဂလန်ရောက်ရှိ သွားခဲ့တာ အခုအချိန်အထိ ဝိတိုရိယပြတိုက်နဲ့ အဲလ်ဘတ်ပြတိုက်တို့မှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၇၅၅ ခုနှစ်မှာတော့ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဒဂုံကိုစစ်အောင်ပြီးတဲ့နောက် မေလ ၂ ရက်နေ့မှာပဲ ရန်အပေါင်းက ကင်းစင်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်လို့ အမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ တပြိုင်တည်း ဆိပ်ကမ်းမြို့အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ဟောင်းတည်ရာက သိပ်တော့ မကျယ်လှပါဘူး။ အရှေ့ဘက်မှာ သိမ်ဖြူလမ်း၊ အနောက်ဖက်မှာ လမ်း ၃၀ အထိ၊ တောင်ဘက်က ရန်ကုန်မြစ်ပေါ့။ မြောက်ဘက်က ကုန်သည်လမ်းအထိဘဲ။ အဲဒီမြို့ကို သစ်တပ်မြို့အဖြစ် သစ်လုံးတွေနဲ့ ကာရံတည်ဆောက်ခဲ့တာ။ သစ်တပ်မြို့အပြင်မှာတော့ တပ်ကလေးလို့ခေါ်တဲ့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ရှိတယ်။ ရန်ကုန်ကို အင်္ဂလိပ်တို့က ကာနယ်ဆိုင်းမ် အလိုအတိုင်း ၁၇၉၅ ကတည်းက Rangoon လို့ ခေါ်တယ်။ ဒါကလည်း ရခိုင်အသံထွက်ကို ဖလှယ်ထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ သာယာဝတီမင်းလက်ထက်ရောက်တော့ တိဂုံဆံတော်ရှင်ကို ပြုပြင်ရင်း အဝေးရောက်မြို့ဝန် ဦးကျော်ရွေးဟာ ကန်တော်ကြီးကို တူးဖော် ဆယ်တော်မူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သာယာဝတီမင်းက အောင်မြင်ရန်နှင်မြို့ဆိုပြီး မြို့တည်ခဲ့သေးတယ်။ အောင်မြင်ရန်နှင်မြို့နဲ့ ဘုရင့်လှေဆိပ်တို့ အဝင်အထွက်လုပ်ရာလမ်းကို လမ်းမတော်လမ်းလို့ ခေါ်ခဲ့ကြတာ အခုအချိန်အထိပါပဲ။ ဒဂုံဆံတော်ရှင်ကိုလည်း ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်လောက်ကမှ ရွှေတိဂုံဆံတော်ရှင်အဖြစ် ရွှေတပ်ခေါ်ခဲ့ကြဟန် ရှိတယ်လို့ သုံးသပ်ချက်တွေလည်း ရှိရဲ့။ ၁၈၅၂ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ဒုတိယစစ်ပွဲနဲ့ အောက်မြန်မာပြည်ဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့သလို၊ ရန်ကုန်မြို့ဟာလည်း အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ ဖြစ်လာတော့တယ်။ ချောင်းမြောင်း အင်းအိုင်နဲ့ ကုန်းမြင့်တွေ များပြားလွန်းလှတဲ့ ရန်ကုန်မျက်နှာပြင်ကို မြေဖို့၊ မြေညှိပြီး ၁၈၅၃ ခုနှစ်မှာ မြို့ကွက်ဖော်ခဲ့တယ်။ စင်ကာပူမှာ မြူနီစပယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မောင်ဂိုမာရီက ဆူးလေဘုရားကို ဗဟိုချက်ထားလို့ မြို့ကွက်ကို စစ်တုရင်ကွက်အတိုင်း ရေးဆွဲပေးတာကိုပဲ ဖရေဇာက ဖြည့်စွက်ပုံဖော်ပြီး ခေတ်မီမြို့တစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗမာဘုရင်ရဲ့ သစ်တပ်မြို့နေရာတဝိုက်ကိုတော့ အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ရုံးတွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်တော့တယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ Any Questions? အဖွဲ့သားတွေ စုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ ရန်ကုန်ပုံရိပ် ပထမပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီကာလမှာ၊ ကိုဗစ်နိုင်တင်း ဒုတိယလှိုင်းကာလမှာ ကျနော်တို့ ဆက်သွယ်ရတာ၊ အလုပ်လုပ်ရတာတွေကလည်း တော်တော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။ ပြီးတော့ စစ်တမ်းကောက်ယူတာတွေလည်း ကျနော်တို့ အတော်လေး ခက်ခက်ခဲခဲကြားကနေပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ရတာပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကျနော်တို့ ပထမအကြိမ်မဲပေးမယ့် လူငယ်တွေရော၊ ပါတီတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်ဆက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ Any Questions? အဖွဲ့သားတွေနဲ့ ဒီဗီဘီက ရရှိထားတဲ့ စစ်တမ်းတချို့ကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်လို့ ပြောရင် ရပါတယ်။ ဆိုတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေက ၅၆ သိန်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ပထမအကြိမ်မဲပေးမယ့် လူကတော့ ၇ သိန်း ရှိပါတယ်။ နောက် အဲဒီအထဲမှာ မသန်စွမ်းမဲဆန္ဒရှင်က ၁၁၀၀၀ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှာ မဲရုံအရေအတွက်တွေကို ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် ၅၇၀၀ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ၄၃ ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်းကတော့ ၁၄၉ မဲဆန္ဒနယ် ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ လွှတ်တော်အလိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေတွေကို ကျနော်တို့ပြန်ပြီးတော့ တင်ပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာကတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၇၀ ရှိပါတယ်။ နောက် ကျနော်တို့ မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ နယ်ရှိပြီးတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ပါတီပေါင်း ၁၅ ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အားလုံးထဲမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု အချိုးအစားကို ပြန်ပြီးတော့ ပြောရရင်တော့ အမျိုးသမီးက ၁၇. ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေပါတယ်။ အမျိုးသားကတော့ ၈၂. ၈၆ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၇၀ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ နယ်၊ ပါတီပေါင်း ၁၅ ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု အချိုးအစားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးက ၁၇.၁၄ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အမျိုးသားက ၈၂.၈၆ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကျနော်တို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်။ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အတွက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၅၈၅ ယောက် ရှိပါတယ်။ မဲဆန္ဒနယ်က ၉၂ နယ်ရှိပြီးတော့ ဝင်ပြိုင်မယ့်ပါတီပေါင်းကတော့ ၃၇ ပါတီ ရှိပါတယ်။ ဒီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အတွက်လည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုကတော့ အမျိုးသမီး ၂၅.၉၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသားကတော့ ၇၄.၀၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မနေရီရီ ဆက်ပြီးတော့ တင်ပြပေးပါဦး။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျမတို့ ဒီနေ့ ဒီအစီအစဉ်ကို အွန်လိုင်းပေါ်ကစစ်တမ်းတွေရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ မြို့တွေက လိုက်ပြီး ကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေနဲ့ ကျမတို့က ပါတီတွေကို ဖိတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိတ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကျမတို့ကပေါ့နော် လက်လှမ်းမီသမျှ ကောက်ယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေက လွဲပြီးတော့ ကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစစ်တမ်းတွေအရပဲ ကျမတို့ ပါတီတွေကို ဖိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ဖိတ်ခဲ့တဲ့ ပါတီတွေကတော့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပြည်သူ့ပါတီတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာပေါ့နော် ကျမတို့ ဒီ Any Questions? Facebook မှာလည်း ကြေညာထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတော့ ဒီအစီအစဉ်ကို တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနေ့ တက်လာတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးမယ့် လူငယ်တွေကို ဒီနေရာကနေပြီး တစ်ခါတည်းပဲ တောင်းပန်ပါရစေရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အဲဒီတော့ ပထမဆုံး တက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့ တစ်ဦးကို ၂ မိနစ်စီလောက် ပါတီမိတ်ဆက်စကား ပြောပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒီတော့ ပထမဆုံး အနေနဲ့ကတော့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင် ပါတီပေါ့နော်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်က ပါတီမိတ်ဆက်စကားလေး ပြောပေးပါဦးရှင့်။ ကျေးဇူးပါရှင့်။ ဒီဗီဘီကိုကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ ပါဝင်ကြတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင့်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ ပါတီတွေအကုန်လုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမတို့ပါတီကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ပရိုဂရမ်မက်တစ် Programmatic ပါတီအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ Programmatic ပါတီ ဆိုတာကတော့ မူဝါဒနဲ့ လုပ်ငန်းလမ်းစဉ် အတိအကျရှိတဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးလို့ရှိရင် ကျမတို့ပါတီမှာ ဦးဆောင်တဲ့ သူတွေကတော့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ တတ်သိပညာရှင်တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူတွေ၊ လူငယ်အမျိုးသမီး ပညာတတ်တွေ၊ ပြီးလို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ စုပေါင်းပါဝင်တာ ဖြစ်ပြီးတော့မှ ကျမတို့က စုပေါင်းဦးဆောင်ခြင်းနဲ့ သွားမယ့်ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က ကိုယ့်ပါတီရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးပေါ့နော်။ ပါတီကို ပြည်သူလူထုနဲ့ မိတ်ဆက်တုန်းက ဆောင်ပုဒ်ကတော့ ကျမတို့က တစ်သင်းလုံးကန်မည် ပီပီပီပေါ့နော်။ ဒါ လူတိုင်းလူတိုင်းက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ကျမတို့က ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုရော၊ အစိုးရရော၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော၊ CSO တွေ အကုန်လုံး အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ကျမတို့ ပြောချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ ကျမတို့ပါတီမှာ လူငယ်တွေကို၊ လူငယ်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကို ကျမတို့ပါတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအရ အာမခံထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ပြီးလို့ရှိရင် ကျမတို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ပုဒ်ကတော့ လူထုဘဝအဓိကပေါ့နော်။ လူထုဘဝအဓိက၊ လူတိုင်းအတွက် ဝင်ငွေ၊ လူတိုင်းအတွက် အလုပ်အကိုင်၊ လူတိုင်းအတွက် အနာဂတ်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ကျမတို့ ရွေးကောက်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးတော့မှ ကျမတို့ရဲ့ မူဝါဒကတော့၊ အဓိကကတော့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းက နေပြီးတော့မှ ကျမတို့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို သွားမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကျမတို့ လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကျမတို့မှာ ဒီ Programmatic ပါတီ ဖြစ်တာနဲ့ အညီပေါ့နော်၊ စုစုပေါင်း လုပ်ငန်းလမ်းစဉ် ၆၈ ရပ်၊ လူမှုဘဝအဓိက လုပ်ငန်းလမ်းစဉ် ၆၈ ရပ်ဆိုပြီးတော့ ကျမတို့က ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း ဖြစ်သလို၊ ပြည်သူလူထုကို ရွေးကောက်ပွဲမှာပေးတဲ့ ကတိကဝတ် ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီတော့ နောက်ထပ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးက ပါတီမိတ်ဆက်စကားလေး ပြောပေးပါဦးရှင့်။ အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ ဒီနေရာကနေ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဒီအစီအစဉ်ကို စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ တင်ဆက်ပေးတဲ့ ဒီဗီဘီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးကြတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ အသီးသီးကိုရော၊ ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပြီးတော့ မေးခွန်းတွေမေးမြန်းမယ့် ပထမအကြိမ်မဲပေးကြသူ လူငယ် မောင်မယ်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ သမိုင်းလိုအပ်ချက်အရ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးကနေ မွေးဖွားလာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားအားလုံးကို တစ်စုတဝေးတည်း စုပေါင်းပြီးတော့ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ပါတီတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပါတီရဲ့ သက်တမ်းက ၃၂ နှစ် တင်းတင်းပြည့်သွားပါပြီ။ နောက် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ၁၉၉၀ ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ စတင်ပြီးတော့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၊ နောက် ၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ကျင်းပမယ့် ၂၀၂၀ ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာလည်း ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလည်း ပြည်သူလူထုရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ပဲ ရပ်တည်ပြီးတော့ သောင်ပြိုကမ်းပြိုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဒီကနေ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ရှေ့မှာ ပြည်သူ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ပါတီအဖြစ်လည်း ရပ်တည်နေပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုတဝှမ်းလုံးမှာ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ နီးပါးမှာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကို ကျနော်တို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းကိုတော့ အများသိဖို့ အတွက် အွန်လိုင်းက ထုတ်ပြန်ထားတာ ရှိပါတယ်။ စာအုပ်တွေ အနေနဲ့လည်း ထုတ်ပြန်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ ဒီနှစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကြွေးကြော်သံက ဒီမိုကရေစီမှန်ကန်ရေး NLD ကို တို့မဲပေး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အောင်လံခိုင်ဖို့ မဲပေးစို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ၊ ကျေးဇူးပါ။ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီက ပေါ့နော်၊ ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်လည်း ဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုစုလှိုင်က မိတ်ဆက်စကား ပြောပေးပါဦးရှင့်။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျမ ဒီနေ့ အစီအစဉ်လေးကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ဒီဗီဘီပေါ့နော်၊ Any Questions? အစီအစဉ်နဲ့ ပါဝင်ကြတဲ့ ပါတီအသီးသီးက လူကြီးမင်းများနဲ့တကွ နားဆင်နေကြတဲ့ သားတို့ သမီးတို့ကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ ကျမတို့ပါတီကတော့ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့ အများလည်းသိကြတဲ့ သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ပါတီက ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၁၂ နဲ့ မှတ်ပုံတင်ကျထားပြီးတော့မှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကျော်ကျော်ရှိတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ပါတီမှာဆိုလို့ရှိရင် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီးတော့ နယ်ပယ်ကဏ္ဍအသီးသီးက တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်များနဲ့ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ အလုပ်အမှုဆောင် ၂၄ ဦးနဲ့ ကျမတို့ စတင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအဆင့်ဆင့်မှာ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ ကျမတို့ အခုလာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင် ၂၆၁ မြို့နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး အနေနဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၉၂၇ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ပါတီရဲ့ မူဝါဒအားဖြင့်၊ ရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်ပေါ့၊ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခြေခံဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်။ နောက် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု စတဲ့ ကဏ္ဍတွေကို စနစ်တကျ အစီအစဉ်ရှိရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားမျှတရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်မယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျမတို့က အရေးအကြီးဆုံး မိမိတို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ ဆီလျော်လိုက်ဖက်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖြစ်လာရေး ဆိုတာကို ဦးတည်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ အချိန်မလင့်မီ အခြေမြှင့်ချီ UBP က ဆောင်ရွက်မယ့် မျက်နှာမူထားတဲ့ဟာ ငါးချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Speed ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ S for social လူမှုရေးကဏ္ဍနဲ့ P for politic နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊ E for economic ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောပေါ့နော်၊ စီးပွားရေးထူထောင်နိုင်မှ နိုင်ငံရဲ့လုပ်ချင်တဲ့ ကဏ္ဍအရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် စီးပွားရေးကို ကျမတို့ မျက်နှာမူထားတယ်။ ပြီးတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။ ကျမတို့နိုင်ငံဟာဆိုရင် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ လက်ညှိုးထိုးခံနေရတဲ့ ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Issue ကိုလည်း ကျမတို့က အရေးကြီးတဲ့ အချက်ထဲမှာ ထည့်ထားပြီးတော့ D for development ဆိုတဲ့ Speed ကြီးကို ကျမတို့ မျက်နှာမူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ မကြာမီ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ပြည်သူသို့ ကတိကဝတ် ၁၂ ချက်ဆိုတာကို အတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျမတို့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီကနေပြီးတော့ လူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ကို ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း ကျမတို့ အတိအလင်းလည်း ကြေညာထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နားဆင်နေကြတဲ့၊ မေးခွန်းလေးတွေမေးဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ကလေးများအတွက် ဒီအစီအစဉ်လေး ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု ဆက်ပြီးတော့ ပြည်သူ့ပါတီက ကိုမျိုးမင်းဇော်ပေါ့နော်။ ကိုမျိုးမင်းဇော်က မိတ်ဆက်စကား ပြောပေးဖို့ ဖိတ်ချင်ပါတယ်။ ကိုမျိုးမင်းဇော်ကတော့ ပါတီဗဟို လူငယ်တာဝန်ခံလည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ အစ်ကို ပြောပေးပါဦးရှင့်၊ ပါတီမိတ်ဆက်စကားလေး။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ဒီအစီအစဉ်လေးကို ဖိတ်ကြားပေးတဲ့ ဒီဗီဘီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ တက်ရောက်မေးမြန်းမယ့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ ညီငယ် ညီမငယ်တွေကိုလည်း အခုလို တက်ရောက်မေးမြန်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကျနော် ပါတီမိတ်ဆက်နဲ့ လူငယ်ရေးရာမူဝါဒ မိတ်ဆက်ကလေးကို ကျနော် ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူ့ပါတီဆိုတာက ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အင်အားစုတွေ၊ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ကို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အင်အားစုတွေ၊ နောက် ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်လိုတဲ့၊ လူထုလူတန်းစားအလွှာအသီးသီး ပါဝင်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ပါတီဟာ တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရရှိနိုင်ရေး၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရေးအတွက် ရည်မှန်းပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ငံသားတိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဆင့်အထိရောက်အောင် ရည်မှန်း သံန္နိဋ္ဌာန် ချပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာတော့ ကျနော်တို့ ကဏ္ဍအားလုံး ခြုံငုံတဲ့ … ကြေညာစာတမ်းမှာတော့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အခုကတော့ ကျနော်က လူငယ်ကဏ္ဍ … ပထမအကြိမ် မဲပေးရမယ့်သူတွေကို ပြောရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော့်ရဲ့ လူငယ်ကဏ္ဍလေးကို အကျဉ်းချုံးပြီးတော့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းပါတဲ့ လူငယ်မူဝါဒ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ကျနော်တို့ ပြည်သူ့ပါတီက ချမှတ်ထားတဲ့ လူငယ်မူဝါဒ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ကျနော် အကျဉ်းချုံး မိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ ပြည်သူ့ပါတီဟာ လူငယ်တွေဆိုတာ အနာဂတ်ကို၊ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးကို ပခုံးပြောင်းတာဝန်ယူမယ့် မျိုးဆက်တွေလို့ ကျနော်တို့ ခံယူတယ်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံ့အနာဂတ်ကို လွှဲပြောင်းရယူနိုင်မယ့် စွမ်းအားပြည့်မျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကို ပြည်သူ့ပါတီကနေပြီးတော့ လူငယ်တွေကို ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံသားကောင်းများဖြစ်လာစေရေးအတွက် အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ နောက် စွန့်ဦးတီထွင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကို လူငယ်တွေ လွယ်ကူစွာ လုပ်နိုင်အောင် ကျနော်တို့ ကူညီပေးသွားမယ်။ နောက် လူငယ်တွေရဲ့ ဘဝလုံခြုံစိတ်ချရရေး အတွက်ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေကို လွယ်လင့်တကူ လက်လမ်းမီ တက်ရောက်နိုင်အောင် ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်း အားပေးကူူညီသွားမယ်။ နောက် လူငယ်ရေးရာ စင်တာတွေကို ကျနော်တို့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးမှာ ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေ၊ နောက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေကို ကျနော်တို့ မျှဝေဖလှယ်နိုင်ပြီးတော့ လူငယ်မူဝါဒတွေကို လူငယ်တွေကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးပြီးတော့ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်အောင် ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုဆက်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းပေါ်ကမေးမြန်းကြမယ့် ကလေးတွေ အစီအစဉ်ကို စတင်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မေးခွန်းမေးမယ့် ပထမအကြိမ်မဲပေးကြမယ့် ကလေးတွေကို ဖိတ်ခေါ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ မောင်လေးကျော်စည်သူဟိန်းပါ။ မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဓိကက ကျနော်မေးချင်တာက ကျနော်တို့ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ကျနော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပေါ့နော်၊ လျှပ်စစ်မီးက အခုအချိန်အထိ ကျနော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာ မိုးရွာတာနဲ့ မီးပျက်တယ်။ ဒါကတော့ အကုန်လုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ အဲဒါမျိုးကို အနည်းဆုံးဖြစ်သွားအောင် ဘယ်လိုမျိုး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ PPP ပါတီကို မေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကို မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ဟုတ်ကဲ့။ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကို မေးထားတဲ့အတွက် ဖြေပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ကျေးဇူးပါရှင့်။ ကျမတို့ပါတီရဲ့ အဓိကမူဝါဒကလည်း လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းပါရှင့်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျမတို့ ပြည်သူအတွက် ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပိုပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်အောင်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ မူဝါဒပါရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ လျှပ်စစ်လို့ပြောလို့ရှိရင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပြောလို့ရှိရင်တော့ ကျမတို့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရသေးတယ်။ ရန်ကုန်ကတော့ တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံးမှာ လျှပ်စစ်မီး ရပြီးသားတော့ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ သို့သော်လည်း ဝန်ဆောင်မှု မကောင်းတဲ့ ပြဿနာပေါ့နော်။ ကျမတို့ကတော့ အဓိကကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရပေါ့နော်။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆိုလို့ရှိရင် လျှပ်စစ်မီး ဖြန့်ဝေရေးပေါ့။ လျှပ်စစ်မီးလို့ ပြောလို့ရှိရင် ကျမတို့က ထုတ်လုပ်တာရှိတယ်၊ ဖြန့်ဖြူးတာရှိတယ်၊ ပြီးလို့ရှိရင် လျှပ်စစ်မီးကို Transmission လိုမျိုး သယ်ဆောင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်။ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် ရန်ကုန်မြို့အတွက် ကောင်းဖို့ဆိုရင် ကျမတို့အနေနဲ့ ဘတ်ဂျက်သုံးရမယ်၊ နံပါတ် တစ်က။ နံပါတ်နှစ်ကကျတော့ ဒီ အီးပီစီတို့ ဘာတို့ပေါ့နော်၊ အဲဒါတွေကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကို ဒီ PPP မော်ဒယ်နဲ့ ကျမတို့သွားရမယ်ပေါ့နော်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကနေပြီး သေချာဆောင်ရွက်နိုင်တာမျိုးပေါ့။ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြပ်မတ်နိုင်တဲ့ စာချုပ်တွေဘာတွေ သေချာချုပ်ပြီးလို့ရှိရင် ဘယ်လိုမျိုးအရည်အသွေးကို လိုချင်တယ်၊ ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကို လိုချင်တယ်၊ ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ ကျမတို့ ပုဂ္ဂလိကနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်၊ ပြည်သူ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်၊ လျှပ်စစ်မီးဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုက အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ကျမ ယူဆပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးပါရှင့်။ နောက်ထပ်မေးမယ့် မောင်လေးကတော့ မောင်ဉာဏ်လင်းထက်ပေါ့နော်။ မောင်လေးမောင်ဉာဏ်လင်းထက် ရှိလား။ မေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီ။ မေး။ ။ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော့်ကို မေးခွန်းမေးခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့်နာမည်က ဉာဏ်လင်းထက်ပါ။ ကျနော်က ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာ ဥပဒေ နောက်ဆုံးနှစ် တက်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ NLD ပါတီကို မေးချင်တာပေါ့နော်။ အစိုးရ အနေနဲ့က၊ NLD အနေနဲ့ နောက်ထပ် ငါးနှစ်မှာ အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် တရားရေးဘက်ကို အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ ပြည့်စုံအောင်၊ လစာပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးပေးဖို့ ရှိလားပေါ့။ ဒါမှသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်၊ ပြည်ထဲရေးက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာ အဓိကကျပေမယ့်လည်း တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါကျတော့ တရားရေးဘက်က အဓိကကျတဲ့အခါကျတော့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံမှ လာဘ်စားမှုတွေနည်းမယ်။ အဲဒါကလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ လက်ရှိမှာ ထပ်အာဏာရမယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ကို ပြောင်းလဲဖို့အစီအစဉ်ရှိလားပေါ့နော်။ အဲဒါလေးတွေ ဖြေပေးပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဆရာစိုးဝင်းဦး ဖြေပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်၊ မေးခွန်းလေးကတော့ နည်းနည်းလေးများတယ် ထင်တယ်နော်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ ခုနကပြောတဲ့ … ညီလေးက ဥပဒေပညာနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတယ်ပေါ့။ ကျောင်းပြီးပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း စောင့်တဲ့အခါမှာ အထူးသဖြင့်အစိုးရ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့ သူက ပိုပြီးတော့ မျှော်လင့်တယ်ပေါ့။ နိုင်ငံမှာတော့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကို တရားရေးဌာနရယ်လို့ သီးသန့်ခွဲပြီးတော့ စဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံတစ်ခုမှာတော့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အားလုံးရဲ့ဘဝကို လုပ်ခလစာနဲ့ သူတို့ဘဝရပ်တည်မှု လုံလောက်မှုရှိအောင်တော့ စဉ်းစားပြီးတော့ လစာကို အခါအားလျော်စွာ နိုင်ငံရဲ့ ဘတ်ဂျက် ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ တောက်လျှောက်တိုးပေးနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ NLD အစိုးရ လက်ထက်မှာ ပိုပြီးတော့ သိသာတဲ့အနေအထား ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အူမတောင့်မှ သီလစောင့်မယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခုတည်းနဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံသားကောင်း မပီသရာ ကျပါတယ်။ ပြီးတော့ အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြည့်စုံဖို့ရယ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဘဝလုံခြုံမှု ရှိဖို့ပေါ့နော်။ အဲဒါကတော့ နိုင်ငံကိုတာဝန်ယူရတဲ့ မည်သည့်အစိုးရမဆို ဆောင်ရွက်ရမယ့် တကယ့် အဓိကတာဝန်ထဲမှာ ပါတယ်လို့ ဆရာတို့ပါတီအနေနဲ့ ခံယူပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ရှေ့လာမယ့် သက်တမ်း ငါးနှစ်ကာလမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပြည်သူတွေပေးတဲ့ တာဝန်ကို ရလို့ အစိုးရအနေနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ပြေလည်ကောင်းမွန်တဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံပြီးတော့ အဆင်ပြေတဲ့ဘဝကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဆရာ ဒီနေရာကနေ သတင်းစကားလေး ပါးနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးပါရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ မေးခွန်းမေးပေးသွားတဲ့ မောင်လေးတွေ၊ ညီမလေးတွေနဲ့ ဒီဘက်က ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ ပါတီက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အခု လူငယ်တွေရဲ့ မေးခွန်းတိုက်ရိုက် မေးတဲ့အစီအစဉ်ကို ဒီမှာပဲ ခဏ နားခွင့်ပြုပါရှင်။
Any Questions? မန္တလေးတိုင်းအစီအစဉ် (အပိုင်း ၄ နောက်ဆုံးပိုင်း)
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပထမအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်အတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ မန္တလေးတိုင်းအစီအစဉ်အပိုင်း ၄ နောက်ဆုံးပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ ကျမ နေရီရီနဲ့အတူ နွယ်နီတင်မောင်နဲ့ ဦးနေဇော်နိုင်တို့က တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီတစ်ခေါက်အတွက် ကျမတို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပါတီကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီ (NDF) ခမောက်ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပါတီဟာ ၂၀၁၀ မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ပထမတစ်ကြိမ် လွှတ်တော်မှာ ကျနော်တို့ လမ်းဖောက်ပြီးတော့ ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၁၆ ယောက် ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ ပုဇွန်တောင် မဲဆန္ဒနယ်ကနေပြီးတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ကျနော့်ရဲ့ တာဝန်ကတော့ ပါတီ အတွင်းရေးမှူး - ၁ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။ အခု ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ ၂၀၁၀ လွှတ်တော်ထဲကို မဝင်ခင်က ကျနော် ပန်းချီဆရာဘဝနဲ့ နေထိုင်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီတော့ ကျနော် လူငယ်တွေကိုမှာချင်တာ လူငယ်ဆိုတာဟာ တက်ကြွတယ်၊ လုံ့လရှိတယ်၊ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတယ်၊ လုပ်ရဲတယ်၊ စွန့်စားရဲတယ်ဆိုတဲ့ သတ္တိတွေ အပြည့်နဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိမိတို့ရဲ့ စွမ်းရည် အစွမ်းအစတွေကို အခုလာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ တိတိကျကျ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အသုံးချစေချင်ပါတယ်။ အသုံးချစေချင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ ကျနော်တို့ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ နောက် ဥပဒေပြုရေးဆိုတဲ့ အာဏာသုံးရပ်ပိုင်စိုးနေတဲ့ ဒီမဲလက်မှတ်ကလေးကို လူငယ်တွေအနေနဲ့ စဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုမယ့်၊ မိမိတို့ရဲ့ မြို့နယ်ကို အကျိုးပြုနိုင်မယ့်၊ အကျိုးဆောင်ပေးနိုင်မယ့်၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲရောက်အောင် ပို့စေချင်ပါတယ်။ ပို့မယ်လို့လည်းပဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ လူငယ်တွေအားလုံး ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ စစ်တမ်းအရ ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီရဲ့ မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ဆီကို စာတွေနဲ့ မေးလာတာတွေရှိပါတယ်။ စာတွေနဲ့ မေးထားတဲ့စာတွေကို ကျနော်ကပဲ ဖတ်ပြပြီးတော့ မေးမြန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမြတ်မိုးဆိုပြီးတော့ မေးထားတာကတော့၊ အကယ်၍တဲ့ … ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်လာသည် ရှိသော် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြင့် မိမိပါဝင်သော အစိုးရတစ်ရပ်ကိုအားဖြည့်ပြီး ပြည်သူများကို အကျိုးဖြစ်စေမလဲ ဆိုပြီးတော့ ပြည်သူ့ပါတီကို မေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖြေ။ ။ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့ တစ်ဦးတည်းကနေ၊ တစ်ဖွဲ့တည်းကနေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို လွှတ်တော်တွင်းမှာရော၊ အစိုးရပိုင်းမှာရော ကျနော်တို့ ပြန်လည်ထိန်းကျောင်းတဲ့ အနေအထားနဲ့ပေါ့၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ဆထက်ထမ်းပိုး ဒီထက်ပိုပြီးတော့ စစ်မှန်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ အခုအခြေအနေမှာ၊ လက်ရှိအနေအထားမှာ ဆိုရင်လည်း အားလုံး သိခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲ အားကောင်းတဲ့ လွှတ်တော်တွေ ရှိသလို၊ အားပျော့နေတဲ့ လွှတ်တော်တွေလည်းရှိတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေဟာဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မြို့နယ်အတွက် တိုင်းပြည်အတွက် လူမျိုးအတွက် လိုအပ်တဲ့မေးခွန်းမျိုး မမေးတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း တော်တော်များများ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီတော့ ညွန့်ပေါင်းသာဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို သွားနေတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်သူလူထုအကျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော်တို့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မောင်သက်ထွန်းဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ USDP ကို မေးချင်ပါတယ်တဲ့။ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုထက် ကျေးလက်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ ဘယ်အရာတွေကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မလဲ။ ဘယ်လိုတွေလုပ်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားလဲ။ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေကို မပျက်စီး မထိခိုက်စေဘဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲတဲ့၊ ကျနော်တို့ မေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျမတို့အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ အဓိကကတော့ ကျေးလက်နဲ့ မြို့ပြလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိကက ကျေးလက်နေ ပြည်သူလူထုက အရမ်းများပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျေးလက်ဒေသနဲ့ ညီမျှတဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဆောင်ရွက်သွားဖို့၊ လက်ရှိလည်း ဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိသလို၊ ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ မြို့ပြနဲ့ကိုက်ညီမှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ကျမတို့အနေနဲ့ အသင့် ရှိပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဆိုရင် အဓိက ကျမတို့တွေဟာ နိုင်ငံထဲမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးစလုံးဟာဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေကို ဒါ ထိန်းသိမ်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း ကျမတို့က လက်ရှိလည်း ထိန်းသိမ်းထားတာ ရှိသလို၊ နောင်တစ်ချိန်မှာလည်း ကျမတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို လက်ရှိအချိန်မှာ ကမ္ဘာက သိသလိုပဲ နောင်တစ်ချိန်အထိကို ကမ္ဘာကနေပြီး အသိအမှတ်ပြုလာအောင် လက်ရှိသိပြီးသားအရာတွေကိုလည်း ဆက်လက်ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းသွားပါ့မယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ ဖြေကြားလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ထပ် ကျနော်တို့ စာတစ်စောင် ရှိပါသေးတယ်။ လူ့ဘောင်သစ်ပါတီကို မေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လုံခြုံရေးတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ မောင်ဟိန်းထက်နိုင်က လူ့ဘောင်သစ်ပါတီကို မေးမြန်းထားပါတယ် ခင်ဗျ။ ဖြေ။ ။ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကို စကားခံချင်တာက ကျနော်တို့က အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ အနေအထားတစ်ရပ် ကျနော်တို့မှာ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံတာကိုက မဲဆန္ဒနယ် နည်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အနေအထားဘက်ကနေ ကျနော်တို့ ဖြေဖို့ ခက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အနေအထားတစ်ရပ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း အများကြီး ရှိတယ်။ ရှိတဲ့အခါကျတော့ တချို့အပိုင်းတွေက လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေတွေ အရကိုက အဲဒီ လူ့အခွင့်အရေး အပေါ်ကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်နေတယ်၊ လုံခြုံရေးအပေါ်ကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်နေတာ ရှိတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ကျနော်တို့က ဒီလိုဥပဒေမျိုးတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကျနော်တို့က နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ပေါ့လေ၊ ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဥပဒေအရ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဥပဒေကို တလွဲအသုံးချပြီးတော့ လုပ်နေတာတွေ၊ တစ်ခါတလေကျရင် ဥပဒေကို ပြောင်ချိုးဖောက်ပြီး လုပ်နေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့က နစ်နာသူတွေ ထိခိုက်ခံစားရသူတွေဘက်က ရပ်တည်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ တရားမျှတမှုရှိအောင်၊ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ လုံခြုံမှု ရှိအောင်၊ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ အခွင့်အရေးတွေ အချိုးဖောက် မခံရအောင် ကျနော်တို့က နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်။ သက်ဆိုင်ရာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလည်း ရှိရင်ရှိမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း တခြားနည်းလမ်းလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့ ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျနော်တို့က ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ လတ်တလောမှာလည်း အဲဒီလိုကိစ္စတွေ ကျနော်တို့က အများကြီး ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီတော့ ကျနော့်ဆီမှာ ဒီလို စာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဗီဒီယိုနဲ့ ကြိုတင်ရယူပြီးတော့ မေးခွန်းမေးမြန်းထားတာ ရှိပါတယ်။ သူကတော့ USDP ကို မေးထားတာပါ။ အခု အဲဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ဖွင့်ပြပါမယ်။ မေး။ ။ အကယ်၍ ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်၊ မေးခွန်းမေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ညီမအနေနဲ့ USDP ပါတီကို မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ အဓိကကတော့ ဒီ နေရာတိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေက အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကြုံတွေနေရတယ်။ ဒါပေမယ့် ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် ပိုပြီးတော့ အကြမ်းဖက် ခံရတာတွေ ပိုပြီးတော့ ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အကယ်၍ ဒီ USDP ပါတီသာ ၂၀၂၀ မှာ ပြန်ပြီးတော့ အာဏာပြန်ပြီးတော့ ရခဲ့တယ်၊ နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့ သူတို့တွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးဖို့ ရှိလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျမအနေနဲ့ မေးချင်ပါတယ်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီမေးခွန်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမတို့တွေက အဓိက ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့အတွက် အာမခံချက်ထဲမှာကိုက အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက်၊ ဘဝလုံခြုံမှုတွေအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်း အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိပါတယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ ပြောလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ဒီအစီအစဉ်ကို စာနဲ့ရေးသားပေးပို့ မေးမြန်းကြသူတွေကိုရော၊ ဗီဒီယိုနဲ့ ကြိုတင်ရယူပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို မေးမြန်းထားကြသူတွေရော၊ ဒီဘက်က ဖြေကြားပေးတဲ့ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဓိကကတော့ ကိုယ်မရွေးမယ့်ပါတီရှိမယ်၊ ကိုယ်သဘောကျမယ့် ပါတီရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူပဲ တက်လာလာ ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်၊ ညီမ ဒီ မြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံး အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ တော်တော်များများတော့ တိုးတက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် တချို့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ စစ်ပွဲတွေ၊ ပြည်တွင်းစစ်တွေ ဖြစ်နေကြတုန်းပဲဆိုတော့ တကယ်လို့ နောက်အစိုးရမှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီပြည်တွင်းစစ်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုံးဝမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပိုပြီး လိုလားပါတယ်။ ပထမဆုံး မဲပေးရမယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းလေးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်။ အခု ဒီအချိန်ကတော့ နည်းနည်းလေး မဲပေးရတာ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ ပါတီကလည်း များလာပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ ပထမဆုံးမဲပေးရမယ့်သူတွေ အနေနဲ့ တော်တော်လေးလည်း စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ရလဒ်ကိုလည်း အရမ်းသိချင်နေတယ်ပေါ့နော်။ အသက်ပြည့်ပြီးရင် ဒါက ကိုယ့်ရဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ ဒီမဲတစ်ပြားက ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေး ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်အပြည့်အဝယူပေါ့နော်။ ဘယ်သူ့ကို မဲပေးဆိုတာထက် ကိုယ်မဲပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ ပယ်မဲဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မဲကတော့ ပေးကြပါ။ နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်က အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ပေးတဲ့မဲ ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခံလာရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်သေချာစဉ်းစားခဲ့ရင် နောင်တမရဘူးပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပထမအကြိမ်မဲပေးမယ့် လူငယ်လေးတွေရဲ့၊ သူတို့ရဲ့ သဘောထားလေးတွေကို နားထောင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အဲဒီတော့ အခု ဆက်ပြီးတော့ ကျမတို့ တိုက်ရိုက်မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းမေးတဲ့အစီအစဉ်ကို စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပထမဆုံးကတော့ မောင်လေး မောင်ထွန်းလင်းအောင်၊ မောင်လေးမေးခွန်းမေးလို့ရပြီနော် မောင်လေး။ မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ မသန်စွမ်းသူတွေဆိုရင် အတန်းတွေအောင်တယ်၊ ဘွဲ့တွေရကြတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်အကိုင်တွေကတော့ ရှားပါတယ်။ ဘွဲ့လက်မှတ်ကြီးကိုင်ပြီး လျှောက်သွားနေရသလို ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာကော ဘယ်လိုမျိုး ပိုမိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ မသန်စွမ်းတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကို ဘယ်လိုမျိုးစီမံကိန်းတွေ ချမှတ်ထားလဲဆိုတာကို ကျနော်သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ကျနော်မေးမှာပါခင်ဗျ။ ဖြေ။ ။ ခုနက မောင်လေးမေးတဲ့မေးခွန်းဆိုရင် စောစောတုန်းကလည်း တစ်ယောက် မေးထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ အစ်မတို့အနေနဲ့ စောစောတုန်းကအတိုင်းပဲ အစ်မတို့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အစ်မတို့တွေ အနေနဲ့ကတော့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို အကုန်လုံးအတွက် တန်းတူညီမျှ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ အစီအစဉ်လေးတွေကိုလည်း အစ်မတို့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ ဆောင်ရွက်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်လို့ အစ်မအနေနဲ့ ပြောလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ မောင်လေး မောင်နိုင်နိုင်ဇော်၊ မောင်လေး မေးခွန်းမေးလို့ ရပါပြီနော်။ မေး။ ။ USDP ပါတီအနေနဲ့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်၊ အခြေခံဥပဒေ … ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာရော ဘယ်လိုတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်ဖို့ရှိသလဲ၊ ပြည်သူတွေအပ်နှင်းတဲ့ အာဏာရအစိုးရရဲ့ အောက်ကို တပ်မတော်ရောက်ရှိအောင် ဘယ်လိုတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိသလဲ၊ ငြိမ်းချမ်းအောင်လည်း ဘယ်လိုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့ရှိသလဲ၊ ပြီးတော့ နောက်ထပ် အစိုးရ အမျိုးအစားလေးမျိုးထဲက ဘယ်လိုအစိုးရမျိုးကို ဆက်လက်သွားမယ်ဆိုတာ မျှော်မှန်းထားသလဲခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ USDP က ဒေါ်ဝါဝါလှိုင်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ မောင်လေးမေးသွားတဲ့ မေးခွန်းမှာဆိုရင် အပိုင်းလေးပိုင်းပါတယ်လို့ အစ်မ မြင်မိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အပိုင်းအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ အစ်မတို့ Constitution ၂၀၀၈ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အစ်မတို့ ပါတီကနေ ချမှတ်ထားတဲ့ ပြည်သူ့အတွက် အာမခံချက်ထဲမှာကိုက အစ်မတို့ ပထမဦးဆုံးပြင်မှာက ပုဒ်မ ၂၆၁ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ အစ်မတို့ ပုဒ်မ ၂၆၁ ကို ပြင်ဖို့ ရှိပါတယ်။ နောက် ဒုတိယတစ်ချက် မေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ မောင်လေးအနေနဲ့ အစ်မတို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက အာဏာပြန်ရမယ်ဆိုရင် တပ်မတော်အနေနဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင် အစ်မတို့ လက်ရှိ အစိုးရအဆက်ဆက်မှာလည်း တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် ဆောင်ရွက်လာတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ အညီ အစ်မတို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဆက်လက် အာဏာရမယ်ဆိုရင် အစ်မတို့ လက်ရှိအနေအထားအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တတိယမြောက် မေးခွန်းအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် အစ်မတို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၅ လက်ထက်မှာပဲ အစ်မတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလို ဆွေးနွေးချက်လေးတွေ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အစ်မတို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသာ အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားပါ့မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း အစ်မတို့ စောစောတုန်းက မေးခွန်းသုံးခုကို ခြုံငုံပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် အစ်မတို့ အစစအရာရာ အားလုံးကို ဆောင်ရွက်သွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ မောင်လေးရဲ့ မေးမြန်းမှုကို အစ်မအနေနဲ့ ဖြေကြားလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကို နေရာတစ်နေရာပေးပြီးတော့မှ လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးတွေ၊ အမြင်တွေကို လက်ခံလာစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီ တက်တဲ့အစိုးရကိုပေါ့။ နောက်ပြီး LGBT တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်မယ့် အစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်လာစေချင်တယ်ပေါ့။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့၊ နောက်ပြီးတော့ Equality ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်။ အဲဒါတွေ အဓိက ဖြေရှင်းပေးစေချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒါတွေ အဓိက ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှ ကျန်တဲ့ဟာတွေက ငြိမ်းချမ်းဖို့ပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့ဒေသက ငြိမ်းချမ်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ဒေသ ငြိမ်းချမ်းဖို့ပေါ့။ အဲဒီဟာသုံးခုကို သွားနိုင်ရင်တော့ ကျန်တဲ့ဟာတွေက အလိုလို Develop ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်။ မဲကတော့ မဖြစ်မနေပေးကြပါလို့။ နောက်ပြီးတော့ တကယ်ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့် ကိုယ်မဲပေးမယ့်ပါတီကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ပြီးတော့ ပေးကြပါလို့။ ပထမဦးဆုံး မဲပေးမယ့်လူငယ်တွေကိုလည်းလေ သေသေချာချာလေ့လာပြီးတော့ တကယ်ကို ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ကောင်းတဲ့မူဝါဒတွေ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် ပါတီကိုပဲ မဲပေးစေချင်တယ်ပေါ့။ အဓိကကတော့ ပညာရေးစနစ်ပေါ့။ ပညာရေးစနစ်က အခုဥစ္စာက ကလေးတွေကအစ ပညာရေးက ပြောင်းနေတာဆိုတော့ ပညာရေးစနစ်က ဘယ်လောက်ထိ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်ထိ ကောင်းသွားမလဲပေါ့၊ အရင်တုန်းကနဲ့ ဘယ်လိုကွာသွားမလဲပေါ့။ အဲဒါမျိုးတော့ နည်းနည်းတော့ မျှော်လင့်ထားတာမျိုးတော့ ရှိတယ်ပေါ့။ ပညာရေးကတော့ အဓိကပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အကုန်လုံးကို တရားမျှတတဲ့ ကိုယ်ရွေးချယ်ချင်တဲ့ ပါတီကိုပဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးဖို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပထမအကြိမ်မဲပေးရမယ့် လူငယ်လေးတွေရဲ့ သဘောထားလေးတွေကို နားထောင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အခု ဆက်ပြီးတော့ ကျမတို့ဆီကို ဗီဒီယိုတွေနဲ့ ပေးပို့တာရှိတယ်။ တိုက်ရိုက်မေးတဲ့ လူငယ်တွေ ရှိသလို စာနဲ့ပေးပို့ပြီးတော့ မေးလာတဲ့ လူငယ်တွေ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ အခုတစ်ခေါက်ကတော့ မောင်လေးထွန်းခန့်ဝင်းက စာနဲ့ပေးပို့ပြီး မေးထားတာကို ဖတ်ပြပေးမှာပါ။ တကယ်လို့များ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့လို့ရှိရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး အပြီးတိုင်ငြိမ်းချမ်းဖို့နဲ့ ပညာရေးအတွက် ဘာတွေများလုပ်ဖို့ အလားအလာ ရှိပါသလဲတဲ့။ ပညာရေးအတွက် ဘာလုပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါသလဲဆိုပြီးတော့ သူက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို မေးထားပါတယ်ရှင်။ ဖြေ။ ။ ကျမတို့အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံးလုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီလက်ထက်၊ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အပြီးအပိုင်ဆွေးနွေးဖို့ကိုလည်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆွေးနွေးမှုရဲ့ သဘောတရားဆိုတာကတော့ အားလုံးက ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပြီး ယူရတဲ့ သဘောတရား ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာအားလုံးကတော့ ပြီးပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့၊ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနေအထားရှိတယ်လို့ ပထမမေးခွန်းအနေနဲ့ ဖြေလိုပါတယ်။ ဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ အနေအထားတွေကလည်း အသင့်အနေအထားတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ထားတာ အားလုံး ရှိပါတယ်လို့ပဲ ပြောလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးပါ။ ဆိုတော့အခု နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ တိုက်ရိုက်မေးမယ့် မောင်လေးပေါ့နော်။ မောင်လေးရှင်းကိုကိုကြိုင်၊ မောင်လေး မေးခွန်းမေးလို့ရပြီနော်။ မေး။ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ၊ လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေ ဖမ်းဆီးရမှုတွေမှာ ပစ္စည်းတန်ဖိုးနည်းရင်ကတော့ ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်၊ တန်ဖိုးများရင် ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်သွားတာကိစ္စတွေကို နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီက သူတို့နဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါဘူးတဲ့။ ပြည်ထဲရေးနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောထားတယ်။ နောက်ပြီး အစိုးရဘက်ကလည်း ဗစ်တိုးရီးယားကိစ္စကနေပြီးတော့ ကိစ္စကြီးတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြည်ထဲရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လို့ မရဘူးဆိုတာလည်း တွေ့ရတယ်။ အဲဒီတော့ ပြည်ထဲရေးက ဥပဒေနဲ့အညီ အပြည့်အဝ မဆောင်ရွက် မဖော်ထုတ်သမျှကို ဒီထဲကနေပြီးတော့ ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် အနိုင်ရရှိမယ့်ပါတီက ဘယ်လိုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမလဲဆိုတာ သိချင်တာပါ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီတော့ လူ့ဘောင်သစ်က ဦးအောင်မှိုင်းဆန်း၊ ဖြေပေးလို့ရမလားရှင့်၊ ဒီမေးခွန်းကို။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အဲဒီတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာက ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာပေါ့နော်။ အဲဒီဟာက အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ပိုပြီးတော့တောင်မှ ရင်ဆိုင်ရတယ်။ ပိုဆိုးတာက မူးယစ်ဆေးဝါးအများဆုံး ထွက်ရှိတဲ့ဒေသထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါနေတယ်။ ပါနေတဲ့အခါကျတော့ ဒီကိစ္စက တော်တော်ကို ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ ပြဿနာပါ။ အဲဒီတော့ ပထမတစ်ချက် အနေနဲ့ကတော့ ညီလေးပြောသွားသလို မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးယူကိုင်တွယ်တဲ့ နေရာမှာ တကယ်ကို အားနည်းချက်တွေရှိနေတာ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီ နည်းနည်းလက်ကြီးကြီးသမားတွေဆိုရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ နည်းနည်းအစွယ်အပွားတွေ၊ ကိုင်းဖျားတွေဆိုလို့ရှိရင် အမြဲတမ်း ခံရတယ်ဆိုတဲ့၊ မိတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါက ဘာကိုပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင် သက်ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမယ့် ယန္တယားတွေ၊ ဥပမာ - ရဲတွေပါမယ်၊ စသည်ဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတဲ့ ယန္တယားတစ်ခုလုံးမှာ အားနည်းချက်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ကို သွားပြီးတော့ တွေ့တယ်။ နောက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ယုံကြည်တယ်။ ဆိုတော့ အဲဒါတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှ စောစောကပြဿနာကို ကျနော်တို့က ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားက မြန်မာနိုင်ငံက ရှိနေတုန်းပဲ။ အဲဒီတော့ ပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်ဆိုင်းပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှလည်း တချို့ကိစ္စတွေမှာ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာက လျော့ပါးသွားမှာ။ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာ လျော့ပါးဖို့ဆိုရင် တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတယ်။ နောက်တစ်ခုက မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယန္တယားတွေ အကုန်လုံးက တကယ်ကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အနေအထားမှာ ဖြစ်နေရမယ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ကင်းနေရမယ်။ အဲဒီလိုအနေအထားတွေ ဖြစ်နေမှပဲ ကျနော်တို့ ဖြေရှင်းလို့ရမှာ။ အဲဒီတော့ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့က အနိုင်ရပါတီတရပ်အနေနဲ့တော့ ဘယ်အစိုးရတက်တက် တော်တော်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာလို့ မြင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးပါ။ ထပ်ပြီးတော့ ဒီမေးခွန်းကိုပဲလေ၊ ပြည်သူ့ပါတီက ဦးကျော်ကျော်စိုးကို မေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာ ဖြေပေးပါဦး။ ဖြေ။ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ရင်တော့ အမျိုးသားရေးတာဝန် တစ်ရပ်အနေနဲ့တော့ ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်ရမှာပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာက အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင် အောင်မြင်နိုင်မယ်။ အခုမူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေးဆိုပြီးတော့ လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လည်း လုပ်လို့မရဘူး၊ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု အားလုံးပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းလာဖို့လည်း လိုတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာမှာ သတင်းမီဒီယာကိစ္စကလည်း အဓိကဖြစ်တယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်ကို တိတိကျကျပေါ့ သတင်းယူခွင့်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခွင့်တွေရော ရှိသလား။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုက စိုးမိုးမှုရော ရှိသလား။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကို ကျနော်တို့အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှသာလျှင် အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ် ဆရာမ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့တော့ မစစ်ဆေးနိုင်ဘူး။ အစိုးရတစ်ဦးတည်းနဲ့တော့ မူးယစ်ဆေးဝါး လုံးဝ ကင်းရှင်းသွားဖို့၊ အားလုံး ပပျောက်သွားဖို့ဆိုတာတော့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ ပြည်သူလူထုကလည်း ပါဝင်ရမယ်၊ လူငယ်ထုကလည်း ပါဝင်ရမယ်၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးကလည်း ပါဝင်ရမယ်၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီကိုလည်း ရယူဆောင်ရွက်ရမယ်ဆရာမ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီတော့ နောက်ထပ်တစ်ယောက်က မောင်လေး အေးချမ်းဖြိုး။ မေး။ ။ ကျနော်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ ဘယ်ပါတီမှာနေနေ ကျနော်တို့တွေ ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုကို သွားနေတဲ့အခါမှာ ဖက်ဒရယ်မှာ နှစ်ရပ်ရှိတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘယ်ဖက်ဒရယ်ကို သွားနေတာလဲ မသိဘူး။ နောက်တစ်ခု မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ ကျနော်တွေက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေက ဖက်ဒရယ်ရမှ ငြိမ်းချမ်းမှာလား၊ ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် ဖက်ဒရယ်သွားနေတာလားဆိုတဲ့ ဇဝေဇဝါတွေလည်း ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ နောက်ဆုံးတစ်ချက် မေးချင်တာကတော့ ကျနော်တို့တတွေ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံမှာ လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NCA စာချုပ် ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ၊ တကယ်လို့သာ NCA စာချုပ် ချုပ်ပြီးရင် ငြိမ်းချမ်းရေးသာ ရသွားမယ်ဆိုရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေ၊ ရခိုင်ဒေသတွေမှာဆိုရင် တကယ်လို့သာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရသွားမယ်ဆိုရင် အာဏာရပါတီအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးတွေကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် အာဏာရပါတီအနေနဲ့ ဘယ်လိုပြုမူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ မောင်လေးအခု ဘယ်ပါတီကို မေးချင်လဲမောင်လေး။ မေး။ ။ ကျနော် USDP ကို မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့ USDP က ဒေါ်ဝါဝါလှိုင်ဖြေပေးပါဦးနော်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုအနေအထားအရ ဒါ ကျမတို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) မှာကိုက ဒါ အစ်မတို့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ၊ ဒါ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံတော် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တဲ့အတွက် အစ်မတို့ကတော့ အစ်မတို့ပါတီအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အစ်မတို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ၁၃၅ မျိုးနဲ့အတူတကွ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က ခုနက မောင်လေးပြောတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အစ်မတို့ လက်ရှိကာလမှာ အစ်မတို့အစိုးရ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ အစ်မတို့အနေနဲ့ကတော့ ဖြေကြားပေးနိုင်မှု မရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ အစ်မတို့အနေနဲ့ နောင်လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ အစ်မတို့ ပါတီက အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအလိုက် ဆောင်ရွက်ရမယ့် လိုအပ်ချက်တွေကို ဒေသအလိုက် ကြည့်ပြီးတော့ အစ်မတို့အနေနဲ့ ဒေသအလိုက် အကျိုးပြုစေမယ့် ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ မောင်လေးရဲ့ မေးခွန်းကို အစ်မအနေနဲ့ ဖြေကြားပေးချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အဲဒီတော့ မေးခွန်းမေးပေးသွားတဲ့ မောင်လေးတွေ၊ ညီမလေးတွေကိုရော ဒီဘက်က ဖြေပေးသွားတဲ့ ပါတီအသီးသီးက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Any Questions? မန္တလေးတိုင်းအစီအစဉ် (တတိယပိုင်း)
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပထမအကြိမ် မဲပေးကြမယ့် လူငယ်တွေက သူတို့သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Questions? အစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတပတ်အတွက် ရွေးချယ်ထားတာကတော့ မန္တလေးတိုင်းအစီအစဉ် တတိယပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ ကျမ နေရီရီနဲ့အတူ နွယ်နီတင်မောင်နဲ့ ဦးနေဇော်နိုင်တို့က တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီတစ်ပတ် ကျမတို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမရပူရရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကတော့ လက်ချိတ်လွန်းပျံ ဧကနံ သည်တွင် အစပေါ်ပြီ ဆိုတဲ့အတိုင်း အင်းဝခေတ်က စခဲ့တဲ့ ချိတ်လုံခြည်ဟာ အမရပူရခေတ်မှာ ပိုးချည်နဲ့ရက်လုပ်တဲ့ လွန်းရာကျော် ကြိုးကြီးချိတ်အထိ တိုးမြှင့်လာခဲ့တယ်။ စုဖုရားလတ်ဝတ်လေ့ရှိတဲ့ ကြိုးကြီးချိတ်ပိုးထမီဟာ လွန်းပေါင်း ၂၆၄ လွန်းနဲ့ ရက်လုပ်ခဲ့တာကြောင့် အလွန်အဆင့်မြင့်ပြီး ကျက်သရေရှိလှတယ်လို့ အဲဒီအချိန်က ကမ္ဘာ့ရက္ကန်းပညာရှင်တွေက ချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ သမိုင်းထဲကမန္တလေးစာအုပ် ပြုစုခဲ့သူ စကော့အိုကွန်းနားကတော့ ပိုးသားမျှင်အရှေ့တိုင်းလို့ တင်စားပြီး စာတစ်အုပ် ရေးခဲ့သေးရဲ့။ ဘုရင့်ပုဆိုးပိုးချည်းဆိုသလိုပါပဲ။ အခုအချိန်ထိ အမရပူရရဲ့ ညဉ့်ယံတွေမှာ ကြိုးကြီးချိတ် ရက်လုပ်နေတဲ့ ရက္ကန်းခတ်သံတို့က ဝေစည်နေကြဆဲပါ။ အဲဒီလို အထင်ကရဒေသတွေကြောင့် အင်္ဂလိပ်တို့က မဟာမန္တလေးအဖြစ်တည်ဖို့ စိတ်ကူးချမှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မှမဟုတ်ပါဘူး၊ မင်းတုန်းနန်းတည်စဉ်က နိမိတ်ရွှေကြိုးနဲ့ သတ်မှတ်ရာအရပ် ချဲ့ထွင်မယ်ဆိုရင် တောင်လားသော် ဒုတ္ထဝတီ၊ မြောက်လားသော် မတ္တရာမြစ်၊ အနောက်လားသော် ဧရာဝတီမြစ်၊ အရှေ့လားသော် နတ်ထိပ်တောင်ရိုးအထိပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့ရာဇဝင် သမိုင်းမြို့တော်တွေဖြစ်တဲ့ ဇေယျာပူရ (စစ်ကိုင်းမြို့)၊ ရတနာပူရ (အင်းဝမြို့)၊ အမရပူရ ရတနာပုံတို့နဲ့ တဆက်တည်းနီးပါး တည်ရှိနေတာတွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပေါင်းစုလိုက်မယ်ဆိုရင် မန္တလေးဟာ မဟာမန္တလေးအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရနေပါပြီ။ မန္တလေးသို့သွားရာလမ်း ကဗျာနဲ့အတူ ကမ္ဘာသိဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့။ လတ်စ်ဗီးဂတ်စ် ကမ်းမြှောင်မှာ ၄၃ ထပ်မြင့် အပန်းဖြေ ဟိုတယ်ကြီးကိုလည်း Mandalay Bay လို့ အမည်ပေးထားခြင်းကလည်း အံ့အားသင့်စရာပါ။ မန်းရတနာပုံ နေပြည်တော်ကို လွမ်းဆွတ်သတိရဖွယ်ရာပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ မန္တလေးတောင်ကို ဦးစီးပြုပြင်ခဲ့တဲ့ ဦးခန္တီ ပထမဆုံးဆောင်းခဲ့တဲ့ ဒေါက်ချာဟာလည်း မြူးနစ်ရိုးရာပြတိုက်မှာ အထင်ကရ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါတွေဟာ ပုံပြင်မဟုတ်၊ ဒဏ္ဍာရီမဟုတ်တဲ့ မန်းနေပြည်တော်ရဲ့ အထင်ကရတွေပေါ့။ ဗြိတိသျှပြတိုက်တွေမှာရှိတဲ့ မြန်မာ့ထီးသုံးနန်းသုံး နန်းဆင်ပစ္စည်းအချို့ဟာလည်း ယဉ်ကျေးမှု အတိမ်အနက်ကို ဖော်ပြနေကြဆဲပါ။ မန္တလေးနဲ့ ညီအစ်မတော်ချင်သူတွေကလည်း အများသား။ ကိုရီးယားရဲ့ အော်လ်ဆန်မြို့၊ တရုတ်ရဲ့ ကူမင်းမြို့နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ ဖနွမ်းပင်မြို့တို့ဟာလည်း မန္တလေးရဲ့ ညီအစ်မမြို့တော် စာရင်းဝင်တွေပေါ့။ မြို့ဝန်ဟောင်း ဘိုင်ဆက်လက်သစ်တို့ ကြီးစိုးခဲ့ရာ နှစ်ကာလဆိုးကြီးကို ရှည်ကြာစွာ ဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက် အခုတော့ မန္တလေးမြို့ဟာ ပြာပုံထဲက ထပျံလာတဲ့ ဖီးနစ်ငှက်လိုပါပဲ။ မဟာမန္တလေးလို့ ခေါ်တွင်ရလောက်အောင် မြို့ပြတည်ဆောက်မှုတွေဟာ အံ့မခန်းသစ်လွင်တောက်ပလို့ပေါ့။ မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားတွေက အသက်လေးရယ်တဲ့ ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်ခိုဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း မှိုင်းညို့ညို့အရှေ့ရိုးမနဲ့ ပြာလဲ့လဲ့ ကျုံးရေပြင်ကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ လေနုအေးအရသာကို ခံစားရင်း မန်းတောင်ရိပ် ခိုနေကြပုံဟာ နန်းဆန်လွန်းတဲ့ မဟာ မန္တလေးအလှနဲ့ ပနံသင့်နေပါတယ်။ မြို့တည်နှစ် ၁၆၁ နှစ် လွန်မြောက်ပြီးတဲ့နောက် မန္တလေးမှသွားရာလမ်းမှာ ဘာတွေဖြစ်ဦးမယ်၊ ဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းရဦးမယ် ဆိုတာကို အတိအကျမဆိုနိုင်ပေမယ့် မဟာမန္တလေးကတော့ ပန်းနုရောင်အရုဏ်ဦးနဲ့အတူ သစ်လွင်ပလွှား တောက်ကြွားလို့ပင် ရှိနေပါတော့တယ် ခင်ဗျာ။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ Any Questions? အဖွဲ့သားတွေ စုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ မန္တလေးပုံရိပ် နောက်ဆုံးအပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ စာတွေနဲ့မေးမြန်းထားသူတွေရဲ့ စာတွေကိုလည်း ဖတ်ပြဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကလည်း အိမ်ကနေပြီးတော့ တာဝန်ယူနေတဲ့ Any Questions? အဖွဲ့သား နွယ်နီတင်မောင်ကနေပြီးတော့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ စာနဲ့ပေးပို့ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ပထမဦးဆုံးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ ဉာဏ်ထက်ဌေးဝင်းရဲ့ စာပါ။ သူကတော့ ပြည်သူ့ပါတီ အနေနဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအစီအမံတွေရှိလဲ သိချင်ပါတယ်တဲ့။ ပြည်သူ့ပါတီကို မေးထားတဲ့အတွက် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။ ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ အနာဂတ်ကာလကို လွတ်လပ်စွာတီထွင်ဖန်တီး တွေးခေါ်နိုင်တဲ့၊ အားပေးနိုင်တဲ့ သင်ကြားမှု ပညာရေးစနစ်မျိုးကို ကျနော်တို့ အဓိက ပုံဖော်သွားပါမယ်။ အဲဒီတော့ ထူးချွန်သူများကို ပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့ စနစ်မျိုးကိုလည်း ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းတွေမှာဆိုရင် တီထွင်ဖန်တီးမှုများနဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို အားပေးပြီးတော့ ကျနော်တို့ အားပေးအားမြှောက် ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ နောက် မသန်စွမ်းသူများ ပညာသင်ကြားရေးကိုလည်း ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ ကျောင်းနေရွယ် ကလေးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြားရေးကိုလည်း ကျနော်တို့ အစွမ်းကုန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမယ်။ ပညာရေးကဏ္ဍတစ်ရပ်လုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ သင်ကြားမှု သင်ယူမှု ကဏ္ဍတွေမှာဆိုရင် ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ စွမ်းရည်မြင့်မားရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါ့မယ်လို့ ကျနော်တို့ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ထဲမှာ ပါပါတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ ပြည့်ဖြိုးအောင် ပေးပို့ထားတဲ့ စာလေးပါရှင့်။ ကျနော်တို့ ပုဂံဒေသကတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ အဓိက လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဒီထက်မက ပိုမိုတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုလည်း သိချင်ပါတယ်တဲ့။ မကြာခင်ကမှ ယူနက်စကိုဝင်ထားတဲ့ ပုဂံဒေသကို ဟိုတယ်ကြီးတွေနဲ့ အကျည်းမတန်စေချင်တော့ပါဘူးတဲ့။ နောက်ထပ် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ကြီးတွေကို မြို့ပြင်မှာ ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား ဆိုပြီး မေးထားတာပါ။ သူကတော့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို မေးထားတာပါရှင့်။ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။ မင်္ဂလာပါအစ်မရေ။ လက်ရှိ ဆောက်လုပ်ဆဲ ဟိုတယ်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ကျမတို့က လက်ရှိ အနိုင်ရ အစိုးရလည်း မဟုတ်ပါဘူးရှင့်။ အဲဒီအတွက် ကျမတို့အနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းက ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တချိန် အနိုင်ရအစိုးရကပဲ ဖြေကြားရမယ့် မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ ပြောလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ မပြည့်စန္ဒာအောင်က မေးထားတာပါ။ သူကတော့ မိတ္ထီလာမြို့နယ်ကပါ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အရွေးခံရပြီဆိုရင်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ဘာအထောက်အကူများ ပေးမလဲတဲ့။ သူကတော့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို မေးထားတာပါ။ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဦးရှင့်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ရွေးချယ်ခံရပြီဆိုရင် ပြည်သူတွေကို ဘာအထောက်အကူ ဖြစ်လဲပေါ့။ အဲဒီတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းက လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားတာရှိမယ်၊ နောက်ပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲကို ရောက်သွားတာလည်း ရှိမယ်။ ရှိတဲ့အခါကျတော့ သူက အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်းရော၊ လွှတ်တော်က တရားစီရင်ရေး အာဏာပိုင်းရောက ပြည်သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့၊ ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့၊ ပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်လုံခြုံမှု၊ ပြည်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အစရှိသဖြင့် အကုန်လုံးပေါ့လေ ဒါက။ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အဘက်ဘက်ကနေ လွှတ်တော်ပိုင်းကရော၊ အစိုးရပိုင်းကရော ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းကို ရသွားတာပေါ့။ ဆိုတော့ ရွေးချယ်မခံရရင် ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ရွေးချယ်ခံရမှ ဒီလိုဟာမျိုးကို စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိမှာပါ။ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အာဏာရှိမှလည်း၊ အခွင့်အလမ်း ရှိမှလည်း ပြည်သူတွေအပေါ်ကို ကောင်းကျိုးကို လုပ်ဆောင်ပေးလို့ ရမှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက တစ်ခုရှိတာက ခြွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ ပြည်သူတွေကောင်းကျိုးထက် သူတို့ပါတီ၊ သူတို့တကိုယ်ရည်အတွက် ပိုပြီးတော့ ဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ ပေါ့စတစ်ထက် နဂ္ဂတစ်ဘက်ကို ပိုပြီးတော့ များသွားတာ ဖြစ်မှာပေါ့။ အဲဒီတော့ အမြဲတမ်း ရွေးချယ်ခံရတိုင်း ကျနော်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်လို့တော့ မပြောချင်ဘူးပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုလိုမျိုး ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကော၊ မေးမြန်းပေးကြတဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတွေကော ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင့်။ ကဲ ကျနော်တို့ ဆက်ပြီးတော့နော်၊ ၂၀၁၅ တုန်းက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာ မဲရရှိမှု အခြေအနေတွေ၊ ပါတီအလိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အခြေအနေလေးတွေ ကျနော်ဆက်ပြီးတော့ တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ၂၀၁၅ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဆိုလို့ရှိရင် မန္တလေးတိုင်းက မဲရရှိမှု အခြေအနေ၊ မဲပေးသူရာခိုင်နှုန်းက ၇၂. ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီ ၇၂. ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းမဲပေးကြတဲ့အထဲမှာ မန္တလေးတိုင်းမှာ ပါတီအလိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာတွေကို ကျနော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပါတီက ၁၆ ပါတီရှိပြီး အနိုင်ရတဲ့ ပါတီက ၂ ပါတီရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆိုရင် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပါတီက ၉ ပါတီရှိပြီးတော့ အနိုင်ရတဲ့ပါတီက ၂ ပါတီ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပါတီက ၁၈ ပါတီရှိတယ်။ ကျနော်တို့ အနိုင်ရတဲ့ပါတီက ၃ ပါတီရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပါတီအလိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ အခုကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ Any Questions? အစီအစဉ်ကို ဝင်ရောက်ပြီးတော့ စစ်တမ်းတွေ ကောက်ခံတဲ့အခါ စစ်တမ်းတွေကို ဖြေဆိုတဲ့အချက်အလက်လေးတွေကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ စစ်တမ်းဖြေဆိုတဲ့ လူမျိုးအုပ်စုတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗမာက ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဗမာနဲ့ ရှမ်းပေါင်းထားတာက ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီးတော့ အခြားလူမျိုးတွေကတော့ ၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျနော်တို့ စစ်တမ်းကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျနော်တို့ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကျနော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသားက ၄၅.၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပြီးတော့ အခြားက ၁၄. ၇၅၊ ပြီးတော့ အမျိုးသမီးကတော့ ၃၉. ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ အသက်အုပ်စုတွေကို ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူတွေရဲ့ အသက်အုပ်စုကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ၁၆ ကနေ ၂၅ နှစ်အတွင်းက ၉၇.၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုထားပြီးတော့ ကျနော်တို့ ၂၆ နှစ်ကနေ ၃၅ အထိကတော့ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ ပထမအကြိမ်မဲပေးမယ့်သူတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးမယ့်လူ ၉၁. ၀၀ ရာခိုင်နှုန်းက ဝင်ရောက်ဖြေဆိုထားပြီးတော့ ပထမအကြိမ်မဲပေးမယ့်သူမဟုတ်တဲ့ သူတွေကတော့ ၈. ၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နောက်ထပ် ကျနော်တို့ မသန်စွမ်းအရေအတွက်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ၊ အချိုးအစား ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ခန္ဓာမသန်စွမ်းတာကတော့ ၆၀.၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပါပြီးတော့ အမြင်အာရုံမသန်စွမ်းတဲ့သူတွေကတော့ ၄၀.၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်တာကိုသွားပြီးတော့ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ကျနော်တို့ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာ ဘယ်ပြဿနာတွေက အဓိကရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရမလဲ၊ ဘယ်ပြဿနာတွေက ပိုပြီးတော့ ကြီးထွားလဲဆိုပြီးတော့ အချက်အလက်ပေါ့။ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာ အဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ထပ်ပြီးတော့ စစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုထားပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာကိုတော့ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ စီးပွားရေးက ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပညာရေးက ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးက ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျန်းမာရေး ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကျနော်တို့ အခြားပြဿနာတွေအပေါ် သူတို့ ဖြေဆိုထားတာကတော့ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ကျနော်တို့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်စတင်ထွန်းကားတဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်။ ၁၀ နှစ်သား ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ ပြည်သူလူထုတွေကလည်း မဲပေးပြီးတော့မှ အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ကို ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့၊ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေး ဖြစ်သလို၊ နိုင်ငံရေးတာဝန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ကျမတို့က ဒီမိုကရေစီခေတ်တွေမှာ ပြောကြတဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာသည် ပြည်သူ့ထံမှ ဆင်းသက်သည်ဆိုတဲ့ စကားစုလေးပေါ့နော်၊ ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူလူထုစီကတော့ မဲပေးခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အညီ ကျမတို့ အစိုးရတစ်ရပ်ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀ ကျော်ကတော့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်။ ဒီစနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့လို့အတွက်ကို ၂၆ နှစ် အချိန်ယူခဲ့ရတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ဒုတိယမှာလည်း တပ်မတော်အစိုးရပေါ့နော်။ တပ်မတော်အစိုးရကနေပြီးတော့မှ ၂၄ နှစ်တာ နိုင်ငံ့တာဝန် ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ စနစ်ပြောင်းချင်တာတို့၊ အစိုးရပြောင်းချင်တာဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးတွေ မရခဲ့ပါဘူး။ အခု ဒီမိုကရေစီခေတ်တွေမှာ ပြည်သူလူထု တစ်ယောက်ချင်းစီက ၅ နှစ်မှာ တစ်ခါကျရောက်တဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို မဲပေးရခြင်းဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်ကတော့၊ အနှစ်သာရကတော့ ပြည်သူလူထု ကနေပြီးတော့မှ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကို တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို အပ်နှင်းပေးမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကို အပ်နှင်းခံရတဲ့ အစိုးရကနေပြီးတော့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရကောင်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုက သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ဒီ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ မဲထွက်ပေးကြပါလို့ ကျမက တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျမတို့ ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာပေါ့နော်။ ပါတီကို ဖိတ်တဲ့နေရာမှာ စစ်တမ်းရလဒ်တွေအရ ဖိတ်ခဲ့တာတွေ ရှိသလိုပဲ စစ်တမ်းရလဒ်တွေအရပဲ ပါတီမိတ်ဆက်စကားတွေ ပြောပေးဖို့အတွက် ဖိတ်ထားတဲ့ ပါတီတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျမတို့ ဒါကတော့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ ပါတီ မိတ်ဆက်စကားကို ပြောသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဆိုတော့ အခု ဆက်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်မေးတဲ့ အစီအစဉ်ကို ပြန်ပြီးတော့ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပထမဆုံးကတော့ မောင်လေး မောင်ကျော်ဇင်ထက်။ မေး။ ။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျနော့်နာမည်က မောင်ကျော်ဇင်ထက်ပါ။ ကျနော်က မန္တလေးခရိုင်ရဲ့ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်မေးမယ့် မေးခွန်းကတော့ ကျနော်က LGBT ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် LGBT နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းပဲ မေးသွားပါမယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့ အခုတက်ရောက်လာတဲ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ်က အနိုင်ရပါတီတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် LGBT အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာတွေများ လုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီတော့ မောင်လေးအနေနဲ့ ဘယ်ပါတီကိုများ အဓိကထားမေးချင်သလဲ။ မေး။ ။ USDP ပါတီကို မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဖြေ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေး။ မောင်လေးရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို အစ်မအနေနဲ့ ဖြေကြားရမယ်ဆိုရင်တော့ အစ်မတို့တွေက တကယ်တမ်းကျတော့ လူသားတွေချည်းပါပဲ။ မောင်လေးတို့ LGBT အတွက် ဘာတွေလုပ်ထားလဲဆိုရင် အစ်မတို့တွေက လူတန်းစားမခွဲပါဘူး။ အားလုံးက လူသားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစ်မတို့တတွေ လူတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို တန်းတူပေးဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးတွေလည်း ဒါက ရှိပါတယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မောင်လေး မောင်အောင်မြတ်သူ။ ဟုတ်ကဲ့ မောင်လေး မေးပေးပါဦးနော်။ မေး။ ။ လူ့ဘောင်သစ်က ဦးအောင်မှိုင်းဆန်းကို မေးမှာပါခင်ဗျ။ ကျနော်မေးချင်တာက ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့ပါတီမှာလည်း သူတို့ပြောထားတာရှိတယ်၊ ပြည်သူသာအမိ ပြည်သူသာအဖဆိုပြီးတော့ ပြောထားတာမျိုးတွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ပါတီက Revolution ကနေပြီးတော့မှ လာခဲ့တဲ့ ပါတီတစ်ခု ဖြစ်တယ်ပေါ့။ Revolution ကနေပြီးတော့ လာခဲ့တဲ့ ပါတီတစ်ခု ဖြစ်တာနဲ့အညီ အခု လက်ရှိမှာရော လုပ်နေတဲ့ လမ်းစဉ်ဟာဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရမယ့် အချိန်မှာ မဲဆွယ်ရမှာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် အရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့။ ရခိုင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ Campaign တွေ လုပ်ကြတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်တာတွေကို သူတို့ စိတ်မဝင်စားနိုင်ဘဲနဲ့ တပ်မတော်ကို ဖိအားပေးနေတာတွေ၊ ပါတီတခုအနေနဲ့ ဖိအားပေးတာတွေ၊ Statement ထုတ်ပေးတာတွေ၊ Campaign လုပ်တာတွေ … အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်တယ်ပေါ့။ လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ကိုယ်သာတကယ်လို့ အနိုင်ရပါတီ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ သွားတဲ့အချိန်မှာ၊ အခုလည်း ဒီပုံစံမျိုးသွားတယ်ပေါ့။ သွားတဲ့အချိန်မှာ လူထုက အဲဒီလောက်ကြီးမပါဘူးပေါ့။ လူထုအဲဒီလောက် မပါတဲ့ အချိန်မှာ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပါတီနဲ့အတူတူ လူထုပါဖို့အတွက်က ဘယ်လိုဆက်လုပ်သွားမယ့် လမ်းစဉ်တွေရှိလဲ၊ လူထုကို ကိုယ့်ပါတီနဲ့အတူတူ ဖြစ်ဖို့အတွက်က ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေရှိလဲ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သိချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Revolution က လာတဲ့ ပါတီနဲ့အညီ အရင်တုန်းက Revolution လမ်းစဉ်တွေ ရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ အခု လက်ရှိ အချိန်မှာကော Revolution လမ်းစဉ် ပုံစံမျိုးတွေ တခြားဘယ်လိုမျိုး လမ်းစဉ် ရှိကြသေးလဲပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသိချင်ပါတယ်ဗျ။ ဖြေ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီမှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ပါတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ ပထမတစ်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ လူထုပါဝင်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းရယ်၊ အဲဒီအပိုင်းလေး ကျနော်စပြီး ဖြေကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက စောစောက ညီလေးပြောသွားသလိုပါပဲ ပြည်သူတွေမှာ လတ်တလောမှာ ခံစားနေရတဲ့ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ၊ ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့က အချိန်ဆိုင်းမနေဘဲနဲ့ ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့ နေရာကနေ၊ လှုပ်ရှားထိုက်တဲ့ နေရာကနေပြီး ဝင်ပြီးတော့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိတယ်ပေါ့။ ရှိတဲ့အခါမှာ ပြည်သူတွေက လိုက်ပါမှုနည်းတယ် ဆိုတာကလည်း အမှန်ပါပဲ။ ဒါကတော့ အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ လိုတာပေါ့နော်။ ပထမတစ်ချက်က ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆိုလို့ရှိရင် ရခိုင်အရေးမှာ ရခိုင်လူထုရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရယ်၊ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးရယ်၊ နောက် ရခိုင်လူထု အပေါ်မှာ အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကနေ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ ဘယ်လိုတရားမျှတတယ်၊ တရားမမျှတဘူး အဲဒါတွေအားလုံးကို လူထုကို ကျနော်တို့က ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်၊ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ နားလည်အောင်၊ လူထုက နားမလည်ဘူးလို့ မဆိုပါဘူးနော်။ ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် သိအောင်၊ ဒီထက်ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင် ကျနော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ များများ လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့။ များများလုပ်ပေးပြီး များများ သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ပါဝင်မှုကလည်း တစ်စုံတစ်ရာ မြင့်တက်လာမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တချို့က သိပါတယ်၊ သိပေမယ့် ပါဝင်ဖို့အခက်အခဲတွေ ရှိနေတာလည်း ရှိတယ်။ ဒါလည်း ကျနော်နားလည်လို့ရတယ်။ အရေးကြီးတာက လူတွေ အများကြီးပါလာဖို့ထက် လူတွေအများကြီးက ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံဖို့၊ ဝန်းရံဖို့က ပိုပြီးတော့ ကျနော်တို့က အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က လူတွေလိုက်ပါဖို့ထက် လူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှု၊ လူတွေရဲ့ ဝန်းရံမှုရဖို့ကို ဆက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဦးစားပေးပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ပါတီကို Revolutionary ပါတီတစ်ရပ်အနေနဲ့ မြင်တာကိုလည်း ကျနော်နည်းနည်းလေး အဲဒီမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဖြေချင်တယ်ပေါ့။ အဲဒီဟာက ဒါ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကြားထဲမှာလည်း တကယ်ကို ဆွေးနွေးစရာတစ်ခုအဖြစ် ရှိတယ်ပေါ့။ ဥပမာ - ဒါ တော်လှန်ရေးကာလလား၊ တည်ဆောက်ရေးကာလလား မေးစရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒါ တည်ဆောက်ရေးကာလလို့ ယူဆပြီးတော့ နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိသလို၊ တော်လှန်ရေးမပြီးဆုံးသေးတဲ့ အတွက် တော်လှန်ရေးကာလလို့ ယူဆတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ DPNS ပါတီက ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံ တော်လှန်ရေးဆိုတာကလည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး၊ ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးပဲ။ အဲဒီတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ရှိနေသေးသရွေ့ကတော့ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ရှိနေဦးမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ခေတ် ကာလဟာ တည်ဆောက်ရေးကာလလား၊ တော်လှန်ရေးကာလလားလို့ မေးရင်၊ ကျနော့်တစ်ဦးတည်း အမြင်အရပြောရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ ရှိနေတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရကို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အခိုင်အမာ ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်။ ပေးနေတဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးကာလက မပြီးဆုံးသေးဘူးလို့ ကျနော်က ယူဆတယ်။ အဲဒီတော့ ပါတီအနေနဲ့ ပြောရင်လည်း ကျနော်တို့ ပါတီမူဝါဒတွေ၊ ပါတီကထုတ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ အကုန်လုံး၊ မစ်ရှင်တွေ Goals တွေအကုန်လုံး ကျနော် လေ့လာဖတ်ရှုရသလောက်ကတော့ ပါတီမှာ အဲဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးသာ မပါရင်မပါမယ်၊ ကျနော်လေ့လာမိသလောက် ပါတီရဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ ပါတီရဲ့ ခံယူချက်ဟာလည်း တော်လှန်ရေးကာလဟာ မပြီးဆုံးသေးဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ယူဆချက် ရှိတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ နားလည်ထားတယ်။ အဲဒီတော့ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးကာလကို စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် ကျနော်တို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတာဝန်ဟာ ကျနော်တို့မှာ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပခုံးပေါ်မှာ အဲဒီဟာကြီးကို ကျနော်တို့ အမြဲတမ်းထမ်းထားတယ်ဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလောက်နဲ့ လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီတော့ နောက်ထပ်မောင်လေး မောင်ပြည့်ဖြိုးကျော်။ ဒါကတော့ ပျော်ဘွယ်က မောင်လေး မောင်ပြည့်ဖြိုးကျော်။ ရှိတယ်နော်၊ မေးခွန်းလေး မေးပေးပါဦး။ မေး။ ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်မေးချင်တာကတော့ USDP ကို မေးချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အခု ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မေးချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူငယ်တွေ အားလုံးဟာ တချို့ဆို ၇ တန်း၊ ၈ တန်း အောင်တာနဲ့ သူတို့မှာ ပညာရေးကို ထပ်ပြီးတော့ သင်ကြားနိုင်မှု မရှိတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့မိသားစုရဲ့ စီးပွားရေးမှာ လိုက်ပြီး လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်က ဒီအလုပ်ထဲမှာပဲ ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ USDP အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် ဒီကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကို ဘယ်လိုများစဉ်းစားပေးမလဲဆိုပြီးတော့ သိချင်ပါတယ်။ ဖြေ။ ။ မောင်လေးမေးသွားတဲ့ မေးခွန်းကို အစ်မအနေနဲ့ ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဓိက အစ်မတို့ လူငယ်တွေမှာ ၇ တန်း၊ ၈ တန်းနဲ့လည်း ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းက အဓိက ဘာလဲဆိုတော့ စီးပွားရေးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာတဲ့အတွက် အခုလိုမျိုး လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ အပြင်မှာထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် အစ်မတို့ အနိုင်ရခဲ့ရင် အဓိက စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အရင်ဆောင်ရွက်မယ်၊ ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါ တပြိုင်တည်းမှာပဲ လူငယ်တွေအတွက် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတွေရအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဆောင်ရွက်မယ်။ ဒါ့အပြင် ခုနကပြောသလို လူငယ်တွေအနေနဲ့ ၇ တန်း၊ ၈ တန်းနဲ့ ထွက်တဲ့အခါမှာ အစ်မတို့အနေနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ တက်ကျွမ်းမှု ပညာရပ်တွေပေါ့၊ ဥပမာ - အသက်မွေးပညာရပ်တွေကိုလည်း သင်ကြားပေးဖို့အတွက် ဆောက်ရွက်နေလျှက် ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆိုင်ကယ်ပြင်တာတွေတို့၊ ဒါ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောပြတာ။ နောက်တစ်ခါ အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးပိုင်းဆိုင်ရာ အသက်မွေး ပညာတွေကိုလည်း သင်ကြားထားမယ် ဆိုရင်၊ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်း၊ အခုဆိုရင် အစ်မတို့ နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုပဲပြောပြောပါ ဒါ ခေတ်မီတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းတွေလည်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက် အင်တာနက်လိုင်းတွေကတစ်ဆင့် ပညာရပ်တွေကို ရှာဖွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၊ တစ်ဖက်ကလည်း ပညာတွေသင်မယ်၊ တစ်ဖက်ကလည်း လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေကို ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် လူတွေအတွက် အဆင်ပြေတယ်လို့ အစ်မအနေနဲ့ ပြောလိုပါတယ်မောင်လေး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အဲဒီတော့ ဒီဘက်က မေးပေးသွားတဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတွေကိုရော၊ ဒီဘက်က ဖြေပေးသွားတဲ့ ပါတီအသီးသီးက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။